ယခု Hulu တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်: ကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောရုပ်ရှင်များ (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇) - Netflix သတင်း
ဘာလင်၊ ဂျာမနီ - အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် - (L-R) သရုပ်ဆောင်များသည် Daniel Craig၊ Naomie Harris နှင့် Christoph Waltz တို့သည်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့၌ CineStar တွင်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင် 'Spectre' ရုပ်ရှင်၏ဂျာမန် premiere သို့တက်ရောက်သည်။ (Sony Pictures အတွက် Adam Berry / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
FanSided iOS နှင့် Android အတွက် FanSided Streaming App ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်3Stranger အရာများအတွက် Joyce နှင့် Hopper ကိုတင်ပို့ခြင်း 3
ကြည့်ရှုမယ့်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေသလား။ ဤတွင် Daddy ၏နေအိမ်, ငါ့ကိုမတိုင်မီသင်, Arrival, Iron Man နှင့်များစွာသောအပါအဝင် Hulu အပေါ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် 50 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါပဲ။
သင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်စိတ်နေစိတ်ထားရှိလျှင်၊ ရွေးချယ်ထားသောအတောက်ကိုမရှာမီစူးစမ်းလေ့လာရန်အဆုံးမဲ့နည်းလမ်းများရှိသည်။ အဲဒီမှာရုပ်ရှင်ရုံရှိတယ်၊ Netflix ရှိတယ်၊ Redbox ရှိတယ်၊ ဟောင်းနွမ်းတယ်ဟောင်းကေဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားလည်းရှိတယ်။ သို့သော်ချက်ချင်းလွှင့်ထုတ်သောခေတ်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသည်ကျောဘက်တွင်ရပ်။ ၎င်း၏စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားသည်။ Hulu ကိုသင်၏တီဗီရှိုးများပေါ်တွင်အမီလိုက်ရန်နေရာဟုသင်ထင်မှတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုရရှိထားသည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်လုံးသင်လွဲချော်ခဲ့သောသေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်အကြိုက်များနှင့်ကစားရန်သင်၏စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ကစားပါ။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအနက် Hulu ကဲ့သို့သော blockbusters များရှိသည် ဖေဖေရဲ့အိမ်, သံက Man, ဆိုက်ရောက်, နှင့် မင်းရှေ့မှာ ။ အခွားသောမကြာသေးမီ hits ပါဝင်သည် Star Trek အပြင်, Spectre နှင့် Adaline ၏ခေတ်။
သို့သော်အထူးသဖြင့် throwbacks တပ်မက်သောသူတို့အဘို့အ Hulu အပေါ်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါတယ်။ အတူဘာရင်ခုန်စရာဟာသမှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားပြောဆိုပါ တရားဝင် Blonde, သူမသည်အားလုံးပါပဲ, အချိုဆုံးအရာ, နှင့် 50 ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲများ ။ ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကအနည်းငယ်မှောင်မိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်၊ Hulu ကမင်းကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ် Hitman ရန် ဂျက် Reacher ၏မြင့်မားသော -cctane စိတ်လှုပ်ရှားစီးနင်းရန် ကူးတို့ Bueller ရဲ့နေ့ပိတ် ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Bueller အကြောင်းသိပေမယ့်ကျွန်မတို့ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာရုပ်ရှင်တွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မကြည့်ရသေးပါဘူး။ Hulu မှထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ စာရင်းတွင်ရုပ်ရှင်မာရသွန်ကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏နောက်လာမည့်အစီအစဉ်များကိုရှာပါ။
အတ္တလန်တာကိုဂျော်ဂျီယာတွင်အတ္တလန်တာ၊ ဂျော်ဂျီယာတွင် ၂၀၁၅ နို ၀ င်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်မိတ်ဆက်ပေးသည့်မက်ထရိုအတ္တလန်တာနာ၏ Big Brothers ညီအစ်မများတက်ရောက်သည့် 'Creed' ကြယ်ပွင့်များဖြစ်သော Michael B. Jordan နှင့် Tessa Thompson တို့တက်ရောက်ကြသည်။ (မဟာမိတ်များအတွက် Marcus Ingram / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၁၅
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: ရိုင်ယန် Coogler
သရုပ်ဆောင် - Michael B. Jordan၊ Sylvester Stallone၊ Tessa Thompson၊ Phylicia Rashad၊ ဂရေဟမ် McTavish၊ Wood Harris၊ Ritchie Coster, Tony Bellew
ဒါဟာကြောင်းပြောနေစရာမလိုဘဲတတ်၏ ကျောက်ဆောင် ရုပ်ရှင်စီးရီးသည်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းတွင်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသည့်အကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2015 ရဲ့ Creed ၏ဖြန့်ချိပရိသတ်ကို၏အစဉ်အလာကိုဆက်လက် underdog အားကစားဇာတ်လမ်းထဲမှာအဆုံးမဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေတာနှင့်ရုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်က၎င်း၏ခေါင်းစဉ်ဇာတ်ကောင်များ၏တူညီသောသွေးကြောထဲမှာမျှော်လင့်ချက်များရိုက်နှက်။ ရှင်းနေသည်မှာ Rocky ကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်။
ကျယ်ပြန်ရုပ်ရှင်စီးရီးအတွက်သတ္တမရုပ်ရှင်နှင့် 2006 ရဲ့ Rocky Balboa မှနောက်ဆက်တွဲ, နောက်ဆုံးပေါ် update ကို Rocky ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခြားစိတ်ခွန်အားနိုးပုံပြင်ကိုပြောသည်။ ယုံပါ Adonis Donnie ဂျွန်ဆင် (Michael B. Jordan) သည်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံဖြစ်သော Apollo Creed ၏သား၏နောက်သို့လိုက်ကာ Donnie မမွေးခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ မိမိအဘ၏ခြေရာကိုလိုက်ရန်လိုက်ရှာ Donnie အကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးရန်အငြိမ်းစားယူမှ Rocky (Sylvester Stallone) ကမေးတယ်။
ယုံပါ လျင်မြန်စွာအတွက်အတွက်အကောင်းဆုံး - ပြန်လည်သုံးသပ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည် ကျောက်ဆောင် ပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးများစုစည်းထားသောစုစုပေါင်းစုစုပေါင်းအဆိုအရ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှစ၍ အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေရရှိမှုခေါင်းစဉ်ကိုပင်စွဲမှတ်သွားစေခဲ့သည်။ ကျောက် IV ။ ထို့အပြင် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဖြင့်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၇၆ တွင်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ကြောင့်ရုပ်ရှင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်, နောက်ဆက်တွဲလာမည့်နှစ်များတွင်ဖြန့်ချိဖို့ကောလဟာလသတင်းများအရသိရသည်, ဒါပေမယ့်ယခုအဘို့, Hulu အပေါ် hit ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအချိန်!
New York - March 28: (ယူအက်စ် TABS နှင့် HOLLYWOOD သတင်းထောက်) မင်းသမီးအန်းဟတ်ဝေးသည်နယူးယောက်စီးတီးရှိ Clearview Beekman ပြဇာတ်ရုံတွင် 'Ella Enchanted' ရုပ်ရှင် Premiere သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Evan Agostini / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
49 ။ အဲလာ Enchanted
ဖြန့်ချိသည့်နှစ် - 2004
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: Tommy O'Haver
သရုပ်ဆောင် - အန်းဟတ်ဝေး၊ Hugh Dancy၊ Cary Elwes, Steve Coogan, Aidan McArdle, Minnie Driver, Vivica A. Fox, Eric Idle, Parminder Nagra, Jim Carter, Patrick Bergin, Joanna Lumley, Lucy Punch, Jimi, Mistry, Heidi Klum
2001 ရဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေအောင်မြင်မှုပြီးနောက် မင်းသမီးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ၊ အန်းဟတ်သ်ဝေးသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုအိမ်ထောင်စုနာမည်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ Prada သည်မာရ်နတ်ကိုဝတ်ဆင်သည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ?) နှင့်သူမ၏အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်အတွက်အထှတျအထိ အဆိုပါဆိုးကျိုးများ သို့သော် Hathaway သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကလူသိနည်းသော်လည်းလူသိနည်းသေးသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောထင်ရှားသောနောက်ထပ် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အဲလာ Enchanted ။
ကြိုက်တယ် မင်းသမီးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ ရှေ့မှာ, အဲလာ Enchanted ၎င်း၏ပုံပြင်ကိုလူကြိုက်များသောဝတ္ထုမှငှားသည်။ တစ် ဦး ပြန်ပြောပြ စင်ဒရဲလား, ရုပ်ရှင်သည်စာအုပ်၏ဇာတ်ကြောင်းနှင့်လေသံမှကွဲလွဲမှုရှိသော်လည်းဇာတ်လမ်း၏အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အဲလာ Enchanted Elind (Anne Hathaway)၊ Lucinda (Vivica A. Fox) မှသူမပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအမြဲတမ်းကျိန်ဆဲသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုဗဟိုပြုသည်။ သူမ Dame Olga (Joanna Lumley) နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်အခါအဲလ်လာ၏လက်ဆောင်သည်ရှုပ်ထွေးလာသည်။ Lucinda ကိုစာလုံးပေါင်းပြောင်းရန်သူ့ကိုသတိပေးသည်။
အဲလာ Enchanted Box Office ရဲ့နံပါတ်တွေသို့မဟုတ် Anne Hathaway ရဲ့ရဲရင့်ခြင်း (သို့မဟုတ်အခြားသူမ၏အခြားဂန္တ ၀ င်ဂန္ထ ၀ င်များ၏) အောက်ပါထာဝရထက်သန်စွာပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပေမယ့်မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတော့ဘယ်တော့မှဖျက်လို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ, တောက်ပနတ်သမီးပုံပြင်အားလုံးဖွဲ့စည်းသောစိတ်ကူးယဉ်ဒြပ်စင်အားလုံးနှင့်အတူပြည့်စုံ, 2004 ပျော်စရာ unabashed: အဲလ်, Ogres, gnomes, ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် - ဟုတ်ပါတယ် - Fairies ။ Host ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုနှင့်အတူလွမ်းဆွတ်မှုအားလုံးအတွက်သေချာသေချာပါစေ။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် - မတ် ၂– ဘယ်ဘက်မှညာသို့၊ နောက်တန်း၊ ထုတ်လုပ်သူ David Hoberman၊ မင်းသားစတိဗ်ဟာရစ်၊ သရုပ်ဆောင်ယူဂျင်း Levy၊ မင်းသမီး Missi Pyle၊ သရုပ်ဆောင်စတိဗ်မာတင်၊ မင်းသမီးဂျင်စမတ်၊ သရုပ်ဆောင်ဗစ်တာ ၀ ဘ်စတာ၊ ရှေ့တန်း၊ မင်းသမီးဘုရင်မ Latifah၊ မင်းသား Angus T. Jones၊ ဒါရိုက်တာ Adam Shankman၊ မင်းသမီး Kimberly J. Brown၊ တိရိစ္ဆာန်သရုပ်ဆောင် Linus၊ မင်းသမီး Betty White နှင့် Co-Producer Todd Lieberman 2003 သူတို့၏ Los Angeles ရှိသူတို့၏ရုပ်ရှင်“ The Bringing The House” ရုပ်ရှင်၏သရုပ်ပြပွဲတွင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား။ (Dan Steinberg / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၄၈ ။ အောက်လွှတ်တော်ဆောင်ခဲ့သည်
ဖြန့်ချိနှစ် - 2003
ဒါရိုက်တာ Adam Shankman
ဂျိမ်းစမတ်၊ ဂျုံးစတော့ပ်၊ Missi Pyle၊ ဘက်တီဝှိုက်၊ Michael Rosenbaum၊ Steve Harris၊ Matt Lutz၊ ​​Victor Webster, Kelly Price
သင်တစ် ဦး ဟာသရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အခါ, သငျသညျအလုပ်မလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူဘယ်တော့မှမမှားနိုင်ဘယ်တော့မှအနည်းငယ်သရုပ်ဆောင်များကိုရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ၊ အကယ်၍ သင်တကယ်ကံကောင်းပါက၊ အချို့သောသရုပ်ဆောင်များသည်အတူတူပင်ရယ်စရာကောင်းသောဇာတ်ကားမျိုးတွင်မျက်နှာပြင်မျှဝေကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာဟာသကြီးနှစ် ဦး ဖြစ်သည့်စတိဗ်မာတင်နှင့်ဘုရင်မ Latifah တို့သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် Box Office ၏ဝင်တိုက်မှုတွင်အတူတကွပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ အောက်လွှတ်တော်ဆောင်ခဲ့သည် ။ သငျသညျ throwbacks ချစ်ကြရတယ်!
အောက်လွှတ်တော်ဆောင်ခဲ့သည် ထူးဆန်းတဲ့စုံတွဲဟာသတစ်ခုမှာခေါင်မိုးတစ်ခုအောက်မှာထူးဆန်းတဲ့ပါရမီရှင်နှစ်ယောက်ကိုစုစည်းပေးတယ်။ စတီဗင်မာတင်သည်ချိန်းတွေ့သည့်မြင်ကွင်းသို့ပြန်လှည့်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ရှေ့နေပီတာဆန်ဆန်ဆင်နှင့်ကစားသည်။ သူသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်း (အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မှု၏အစောပိုင်းကာလများ) ကိုကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပြီးသူမအမှုအားကိုယ်စားပြုရန်သူမအားပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမရှိကြောင်းသက်သေပြရန်တိုက်တွန်းထားသောလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသော Charlene (Queen Latifah) နှင့်တွေ့ဆုံမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီစုံတွဲတစ်တွဲကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်ဖို့သင်ယူကြပြီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့နည်းအတိုင်းဖြစ်လာကြတာပါ။
ရုပ်ရှင်သည်ဝေဖန်သူများ၏အနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုရောနှောခဲ့သည်။ အောက်လွှတ်တော်ဆောင်ခဲ့သည် Box Office ၏ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဒေါ်လာ ၁၆၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ သို့တိုင်, ရုပ်ရှင်၏ထိုးစစ်လူမျိုးရေးပြက်လုံး 2003 ခုနှစ်မှာမျက်ခုံးမြှင့်ခဲ့ကြသည်, ရုပ်ရှင်တက်ကြွစွာသို့မဟုတ်အသက်ကြီးရှိမရှိရှာဖွေပါ, Hulu ရုပ်ရှင်မာရသွန်ထိုက်သောအင်္ဂါရပ်များ၎င်း၏ရာထူးအကြားစတိဗ်မာတင် - ဘုရင်မ Latifah အဖွဲ့ - တက်ဝါကြွားအဖြစ်။
နောက်တစ်ခု:47. Dirty Grandpa
CULVER CITY, CA - JUNE 04: Spike TV ရဲ့ ၁၀ နှစ်မြောက် Guys Choice Awards ဆုပေးပွဲမှာသရုပ်ဆောင် Zac Efron (C) မှသရုပ်ဆောင် Robert De Niro (L) နှင့် Joe Pesci (R) တို့သည် Guy Movie Hall of Fame ဆုကိုလက်ခံရရှိ ၂၀၁၆ ဇွန် ၄ ရက်၊ California ရှိ Culver City တွင် Sony Pictures စတူဒီယိုများ။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၁၆
ဒါရိုက်တာ: Dan Mazer
သရုပ်ဆောင် - Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza, Zoey Deutch, Julianne Hough, Dermot Mulroney, Jason Mantzoukas, Jeffrey Bowyer-Chapman, Jake Picking, Michael Hudson၊ Adam Pally၊ Henry Zebrowski၊ Mo Collins, Danny Glover
မကြာခဏဆိုသလို၊ ရုပ်ရှင်တစ်ကားထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်လူအများစုကိုကွဲပြားစေပြီးပရိသတ်များထံမှရယ်မောမှုအနည်းငယ်ရရန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းအပေါ်မှီခိုနေသည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်မှားယွင်းမှု၏ဗဟိုတွင်ရုပ်ရှင်ဒဏ္placeာရီတစ်ခုပင်နေရာချခြင်းကြောင့်သူတို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုခေါင်းပေါ်သို့တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ 2016 ကျိုးနွံသေတ္တာရုံး hit ညစ်ပတ်ပေရေ ရောဘတ်ဒီနီရိုမှရိုးရိုးသားသားဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်ပရိသတ်များနှင့်ဝေဖန်သူများကပင်ရိုသေလေးစားခံရသည့်သရုပ်ဆောင်မှတွေ့ခဲ့ဖူးသောမည်သည့်အရာများနှင့်မတူသည်မှာထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်တစ်ကားအဖြစ်ပြဇာတ်ရုံသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။
ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းအတွေ့အကြုံများစွာကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေသော R-rated ဟာသဇာတ်ကားများနှင့်နီးကပ်စွာကစားသည် ခေါက်သည် နှင့် အဆိုပါ Hangover, Dirty အဖိုး တူညီသောဟာသအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးချခြင်းသည် Zac Efron ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည့် Jason သည်သူဌေး၏သမီး Meredith (Julianne Hough) နှင့်လက်ထပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့် by-the-book ရှေ့နေဖြစ်သည်။ သို့သော်ဂျေဆင်၏အဘိုး Dick (Robert De Niro) ကသူ့ကိုနွေ ဦး ရာသီအတွက် Daytona သဲသောင်ပြင်သို့မောင်းထုတ်ရန်လှည့်စားသည်။ အရာတစ်ခုကအခြားတစ်ခုကို ဦး တည်စေပြီး၊
ညစ်ပတ်ပေရေ အားလုံးအပေါ်သေဖို့ရွေးချယ်တောင်ကုန်းအဖြစ် vulgar မှရုပ်ရှင်ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုးကားသောဝေဖန်သူများကနေနီးပါးတညီတညွတ်တည်းအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အလေးအနက်ထားပြောရလျှင် Robert De Niro နှင့် Aubrey Plaza တို့၏နှုတ်ထွက်စကားများအပြင်သူတို့လုပ်သည့်အရာအချို့သည်သင်၏စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမထားတော့ပါ။ အားလုံးပြီးဆုံးသွားသောအခါသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အမြဲတမ်း ၀ မ်းသာသည်။ Zac Efron သည်လည်းသူ၏အကောင်းဆုံးဟာသဖျော်ဖြေပွဲများထဲမှတစ်ခုကိုလည်းပေးသည်။ သင်ထက်ပိုဆိုးနိုင်သည် ညစ်ပတ်ပေရေ Hulu အပေါ်တစ် ဦး ဟာသရုပ်ရှင်ထွက်ကောက်နေသည့်အခါ။
နောက်တစ်ခု:46. ​​The အတွင်းလူသတ်သမား
နယူးယောက် - 27ပြီ ၂၇: (L-R) သရုပ်ဆောင်များသည် Jessica Alba၊ Casey Affleck နှင့် Kate Hudson တို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ Yorkပြီ ၂၇ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့ရှိရိပ်သာလမ်းတွင်ကျင်းပသော 2010 Tribeca ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်းပါတီပွဲပြီးနောက် 'The Killer Inside Me' သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Tribeca ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် Bryan Bedder / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - 2010
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: မိုက်ကယ် Winterbottom
သရုပ်ဆောင် - Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson, Ned Beatty, Tom Bower, Elias Koteas, Simon Baker, Bill Pullman, Brent Briscoe, Matthew Maher, Liam Aiken, Jay R. Ferguson, Caitlin Turner
ဟောလိဝုဒ်တွင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးများအဖြစ်နာမည်ရခဲ့သော်လည်း Jessica Alba နှင့် Kate Hudson တို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအခြားနေရာများတွင်သူတို့၏အာရုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်အတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအောင်မြင်မှုကို Springboard အဖြစ်အသုံးပြုပြီးအညီအမျှအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ခဲ့သည်။ Alba သည် The Honest Company ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Hudson သည် activewear live Fablectics ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဆယ်စုနှစ်ရဲ့အစမှာသူတို့အတူတူရုပ်ရှင်မှာသရုပ်ဆောင်နေကြတယ်။
အမည်တူဂျင်မ် Thompson ကရဲ့ဝတ္ထု, 2010 ရဲ့အပေါ်အခြေခံပါတယ် လူသတ်သမားငါ့ကိုအထဲမှာ 1952 စာအုပ်၏ဒုတိယရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုအသစ်မှာမကြာသေးခင်ကမှရရှိခဲ့သောအကယ်ဒမီဆုရှင်ကာဇီအက်ဖလက်ခ်အားသူသည်တက္ကဆက်အသိုင်းအဝိုင်းမှလေးစားဖွယ်ကောင်းသောရဲအရာရှိ Lou Ford ဖြစ်သည်။ သူသည်ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သည့် Joyce Lakeland (ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မိသားစုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အစီအစဉ်ကိုသူတီထွင်ခဲ့သည်။
လူသတ်သမားငါ့ကိုအထဲမှာ ထို့အပြင်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူနှင့်ယခင်ရင်ခုန်စရာဟာသမိဖုရားကိတ်ဟတ်ဒ်ဆန်သည်သူမသရုပ်ဖော်ပုံကိုမြင်ရခြင်းထက် ပို၍ မဲမှောင်သောအခန်းကဏ္Louတွင် Lou ၏ထူးခြားသောအခြားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ရုပ်ရှင်သည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်းအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုသရုပ်ဖော်သည့်ဂရပ်ဖစ်မြင်ကွင်းများကိုပြသသည့်အတွက်ဝေဖန်သူများကရုပ်ရှင်ကိုခေါက်ခဲ့သည်။ သို့တိုင်, ရုပ်ရှင်စဉ်းစားဟန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတစ် ဦး သည်းထိတ်ရင်ဖိုအဖြစ်ချီးကျူးခဲ့သည်, ထိုသို့ Hulu အပေါ်၎င်း၏အငြင်းပွားဖွယ်ဘုန်းအသရေ၌ရှိသမျှအတွက်စီးဆင်းရန်မရရှိနိုင်ပါ။
နောက်တစ်ခု:45. ဟန္န Montana: အဆိုပါရုပ်ရှင်
မက်ဒရစ်၊ စပိန် - 22ပြီ ၂၂ - မင်းသမီး Miley Cyrus သည်စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၂၂ ရက်၊ Villamagna ဟိုတယ်၌ Villamagna ဟိုတယ်၌ 'Hannah Montana: The Movie' ဓာတ်ပုံပြပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည် (Carlos Alvarez / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
လေး။ ဟန္န Montana: အဆိုပါရုပ်ရှင်
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2009
ညွှန်ကြားသည် - Peter Chelsom
Miley Cyrus၊ Emily Osment၊ Mitchel Musso၊ Jason Earles၊ Moises Arias၊ Billy Ray Cyrus၊ Lucas Till၊ Vanessa Williams၊ Margo Martindale၊ Peter Gunn၊ Melora Hardin, Barry Bostwick စသဖြင့်
ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်ပိုမိုမကြာခဏဖြစ်ပျက်ပုံရသည်၊ သို့သော်တည်မြဲသောသက်ရောက်မှုများကိုအမှန်တကယ်စွန့်ပစ်သောပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များသည်အပြာရောင်လတွင်တစ်ကြိမ်သာဖြစ်တတ်သည် ဘယ်တော့လဲ ဟန္န Montana ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Disney Channel တွင်ပြသခဲ့သည်။ သူမနှင့်သူမ၏တကယ့်ဘဝလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Miley Cyrus သည်ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးမားသောလမ်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ မင်းစဉ်းစားလိုက်တာ Lizzie McGuire ဒါမှမဟုတ် ဒါက Raven ပါပဲ ကြီးမားခဲ့ ဟန္န Montana နှစ် ဦး စလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်မျက်နှာပြင်ကြီးလိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း ('Miley Cyrus ပြီးနောက်ဒုတိယဇာတ်ကွက်အသွင်အပြင်') နှစ် ဦး စလုံးကမ္ဘာဖျော်ဖြေပွဲ၏အကောင်းဆုံး ဆယ်ကျော်သက်ပေါ့ပ်အဆိုတော်ကသူမနဲ့အတိတ်ကိုထိပ်တိုက်တွေ့ရမယ်။ စီးရီးပရိသတ်များသိသည့်အတိုင်း Miley Stewart (Miley Cyrus) သည်ဟန္န Montana အားလွန်းခြင်းအားဖြင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေစေသည်။ သူမ၏ဖခင် (Billy Ray Cyrus) ကသူ၏သမီးသည်ကျော်ကြားမှုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်ဟုခံစားရသောအခါသူမအိမ်မှ Tennessee သို့သူမအဘယ်မှလာသည်ကိုသတိရသည်။
Miley Stewart ကသူမရဲ့ကျော်ကြားမှုကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေစဉ်စီးရီး၏ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုထက် ပို၍ ရုပ်ရှင်၏လောင်းကြေးသည်သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာကလုယူသောသူ: စီးရီးသူမ၏နှစ်ဆဘဝအကြောင်းကိုအခြားရာသီပြန်လာ၏။ နောက်ဆုံးတွင်ထိုရုပ်ရှင်သည်တေလာဆွစ်ဖ်ရေးထားသောလာမည့်ကြာသပတေးနေ့များနှင့် Miley Cyrus ၏အကြီးမားဆုံးပြဇာတ်တစ်ခုဖြစ်သည့် The Climb ပါဝင်သောပရိသတ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောမေတ္တာစာတစ်စောင်ဖြစ်သည်။ Throwback ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းတွင်ကောင်းမွန်သောကုသမှုကိုသင်ရှာနေလျှင်မကြည့်ရှုရန်ကြည့်ရှုရန် Hulu သို့သွားပါ ဟန္န Montana: အဆိုပါရုပ်ရှင်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ Ca. ရှိ 'The Hot Chick' အတွက် Premiere နှင့်ပါတီပွဲစဉ်တွင်ရော့ Schneider နှင့်အယ်လီနာတို့ပါဝင်သည်။ တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၂ ။ Kevin Winter / ImageDirect မှဓာတ်ပုံ။
44 ။ The Hot ကြက်
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2002
ဒါရိုက်တာ Tom Brady
သရုပ်ဆောင်: ရော့ Schneider, ရာခေလသည် McAdams, အန္န Faris, မMatthewဲလောရင့်, အဲရစ်ခရစ်ယာန် Olsen, ရောဘတ် Davi, Leila Kenzle, Melora Hardin, မိုက်ကယ် O'Keefe, Alexandra Holden, Sam Doumit
အစောပိုင်းဖြစ်ရပ်များတွင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများကိုရှာဖွေသောအခါ၊ အဲဒီမှာအဆုံးမဲ့ PG-13 ဟာသတွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေ၊ ရင့်ကျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ ၀ င်ပြီး၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာမှာရုပ်ရှင်တွေဟာစူပါဟီးရိုးလောကအတွက်အလှည့်အပြောင်းမရောက်မချင်းဒီလမ်းကြောင်းဟာလုံးဝမှေးမှိန်မသွားဘူး။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းလက်တဆုပ်စာသမားများစွာသည်ဤ Sandler-esque ရုပ်ရှင်ကားများ၊ အထူးသဖြင့် Sandler မှထုတ်လုပ်သောကြယ်ပွင့်ဖြစ်သော Rob Schneider တွင်သံသယရှိသူများဖြစ်သည်။ The Hot ကြက် ။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလူကြိုက်အများဆုံးရော့ Schneider ရုပ်ရှင်မဟုတ်သော်လည်း (ထိုဂုဏ်အသရေပိုင် Deuce Bigalow: အထီး Gigolo ), The Hot ကြက် Coachelor Rachel McAdams မကြာခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မည့်အကြောင်းအနည်းဆုံးတော့မှတ်သားထားခဲ့သည် Mean Girls ။ ကျိန်အပ်သောနားကပ်များ၊ အထက်တန်းကျောင်းမှမိန်းကလေး Jessica Spencer (Rachel McAdams) နှင့်ရာဇ ၀ တ်သား Clive Maxtone (Rob Schneider) တို့သည်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီခန္ဓာကိုယ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်, ဂျက်စီကာကျောင်းဆင်းပွဲမတိုင်မီသူမမှပြန်လာဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။
The Hot ကြက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြိုတင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မည်သည့်ရုပ်ရှင်သည်စိမ်းပြာရောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအနည်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိမည်နည်း။ ရာခေလသည် McAdams ၏အခွက်ရန်။ ဒါ့အပြင် The Hot ကြက် Tia နှင့် Tamera Mowry, Ashlee Simpson နှင့် Michelle Branch မှရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။ သင်တစ် ဦး throwback ၏ဘယ်လောက်ပိုတောင်းနိုင်?
နောက်တစ်ခု:43. Jack Reacher: ဘယ်တော့မှပြန်မသွားပါနဲ့
တိုကျို, ဂျပန် - နိုဝင်ဘာ 09: Tom Cruise ဟာ ၂၀၁၆၊ နို ၀ င်ဘာလ ၉ ရက်၊ တိုကျို၊ တိုကျို၊ တိုဟိုရုပ်ရှင်ရုံ Roppongi တောင်တန်းများမှာတိုယိုတာမှာပါ ၀ င်သည့်ရုပ်ပုံလွှာ၏တိုကျို Premiere '' Jack Reacher: Never Go Back 'ကို ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်၊ (Paramount ရုပ်ပုံများအတွက် Ken Ishii / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
43 ဂျက် Reacher: ဘယ်တော့မှပြန်သွားပါ
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: အက်ဒွပ် Zwick
သရုပ်ဆောင် - Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Austin Hebert, Robert Catrini, Robert Knepper, Jessica Stroup, Madalyn Horcher, Teri Wyble
Tom Cruise ဟာ Katie Holmes နဲ့လူသိရှင်ကြားကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုစကားဝိုင်းကိုအများအားဖြင့်စွန့်ခွာသွားတယ်လို့ခံစားရဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေနဲ့ငွေရှာတာတွေကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်တည်းမှာပဲ Tom Cruise ဟာဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ပေါင်းပြီးဝင်ငွေအများဆုံးရုပ်ရှင်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည် အဆိုပါမိခင် နှင့် အမေရိကန်လုပ် ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကသူသည်နောက်ထပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဂျက် Reacher: ဘယ်တော့မှပြန်သွားပါ ။ သူတော့ဘူးသတင်းထဲမှာမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေဆဲပါပဲ။
ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည် ဘယ်တော့မှပြန်မသွားပါနဲ့ Lee ကကလေး, စာရေးသူရဲ့အတွက် 2013 entry ကိုဖွငျ့ဖွစျသညျ ဂျက် Reacher စီးရီး, ဂျက် Reacher: ဘယ်တော့မှပြန်သွားပါ နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲ Susan Turner (Cobie Smulders) ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ titular ဇာတ်ကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျက် Reacher မိမိမိတ်ဆွေဟောင်း၏အမည်ကိုရှင်းလင်း၏အခြေခံပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူလှဲပေမယ့်သူကအစိုးရပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖော်ထုတ်ပြီးနောက်ဥပဒေမှပုန်းရှောင်ရမယ်သည့်အခါမစ်ရှင်အလှည့်ကြာပါသည်။
ဂျက် Reacher: ဘယ်တော့မှပြန်သွားပါ action ကိုသူရဲကောင်း hits ၏ Tom Cruise ရဲ့အဆုံးမဲ့ထင်ရသော Streak ဆက်လက်။ သူနေဆဲသည်သူ၏မျိုးဆက် - spanning အပေါ်အလုပ်လုပ်မယ့်စဉ်းစား မတတ်နိုင်သောမစ်ရှင် ဂိမ်းနှင့်ဤသည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့ဒီဝေးအသစ်ကအရေးယူရုပ်ရှင်စီးရီးဖန်တီးသူမှန်တစ်ခုခုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Jack Reacher ဟာနောက်ပြန်မလှည့်နိုင်ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မြင်ကွင်းသို့သူပြန်လာတာကိုအတော်အသင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သူကသုံးဆယ့်သုံးဆယ့်သုံးပွဲကိုအဆုံးသတ်မည်လားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရ ဦး မှာပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် hit ။
နယူးယောက် - နယူးယောက် - အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် - Montblanc တွင်မင်းသား Toni Collette (L) နှင့် Drew Barrymore တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ကညွှန်ကြားခဲ့သည်: ကက်သရင်း Hardwick
Toni Collette၊ Drew Barrymore၊ Dominic Cooper၊ Paddy Considine၊ Tyson Ritter, Frances de la Tour၊ Jacqueline Bisset နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ဒါကြောင့်လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်မှကြွလာသောအခါ, တခါတရံသူကအားလုံးထက်သောအရာကိုအကြောင်းပါပဲ။ အကယ်၍ ရုပ်ရှင်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်သရုပ်ဆောင်လျှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်တွင်ဇာတ်လမ်းသည်ဒုတိယနေရာဖြစ်လာသည်။ ဒါက 2015 ရဲ့နှင့်အတူအမှုပါပဲ မင်းကိုလွမ်းနေပြီ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက် Toni Collette နှင့် Drew Barrymore အတွက်ဒဏ္legာရီသရုပ်ဆောင်။ နှစ် ဦး စလုံး (သူမကလေးငယ်ကတည်းက Barrymore ရဲ့အမှု၌,) နှစ်ပေါင်းများစွာဖန်သားပြင်ကိုထွန်းလင်းခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုပ်ရှင်များတွင်အတူတူမျက်နှာပြင်မျှဝေကြည့်ဖို့အခြားအရာအားလုံးထက်ပိုမိုအခွင့်ထူးဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကိုလွမ်းနေပြီ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဘဝလမ်းစဉ်များအပေါ်စတင်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှစ် ဦး ၏ခရီးကိုအောက်ပါ။ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအမျိုးသမီးနှင့်မိခင်ဖြစ်သူ Milly (Toni Collette) သည်သူမရင်သားကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီဖြစ်ကြောင်းလှေပေါ်တွင်နေထိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမား Jess (Drew Barrymore) ကသူမ IVF ကုသမှုကိုခံယူသည်ကိုသိသည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကိုခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကအတော်လေးအဖြစ်ခက်ခဲတဲ့ရှေ့ဆက်သောသူတို့ကဲ့သို့အချိန်မှတဆင့်ပါပြီ။ Milly ၏ကျန်းမာရေးကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှသူတို့၏နှောင်ကြိုးသည်ဆယ်ဆကျော်ပိုမိုပြီးခိုင်မာလာသည်။
ဘာဖြစ်တာလဲ မင်းကိုလွမ်းနေပြီ ကင်ဆာရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများနှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုသည်ထင်ရှားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားရှိရုပ်ရှင်အများစုသည်မိတ်ဖက်များအကြားရှိအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအာရုံစိုက်ကြမည့်နေရာတွင်၊ ထိုရုပ်ရှင်သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအားလုံးနှင့်အတူပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီး Collette နှင့် Barrymore တို့မှေးမှိန်သွားသောမှောင်မိုက်သောဟာသအချို့ရှိသည်။ ကတည်းက မင်းကိုလွမ်းနေပြီ ကျယ်ပြန့်သောထုတ်လွှတ်မှုအတွက်ထုတ်မထုတ်ခဲ့ပါ၊ အနည်းငယ်သည်ဤမစုံလင်သောဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုရရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော် Hulu တွင်မင်းနှင့်သင်၏မျက်ရည်ပြွန်များဖုံးအုပ်ထားသည်။
နောက်တစ်ခု:41. Notre Dame ၏ Hunchback
41 Notre Dame ၏ Hunchback
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၁၉၉၆
ဒါရိုက်တာ Gary Trousdale နှင့် Kirk Wise
သရုပ်ဆောင် - Tom Hulce, Demi Moore, Tony Jay, Kevin Kline, Paul Kandel, Jason Alexander, Charles Kimbrough, Mary Wickes, David Ogden Stiers, Frank Welker
သငျသညျ '90 ၏ကလေးတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်, သင်သေချာဘို့ဤမေးခွန်း၏အဖြေရှိသည်: သင်အကြိုက်ဆုံးဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ကဘာလဲ မင်းစိတ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်အနည်းငယ်ရှိသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ထိုသူတို့အနေဖြင့်မကြာသေးမီက hits ပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, နေစဉ် Dory ရှာဖွေခြင်း နှင့် အေးခဲသည် (ကျွန်တော်တို့ဟာနှလုံးသားထဲမှာကြီးမားတဲ့ကလေးတွေပါ။ လာပါ။ ) '၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်လေးတွေအကြိုက်ဆုံးကတော့ Disney Animation ရဲ့ပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မူလ hits များဖြစ်လိမ့်မည်။ ရေသူမလေး နှင့် Tarzan ။
Notre Dame ၏ Hunchback ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ရွှေခေတ်သစ်အလယ်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာပြီးကုမ္ပဏီအတွက်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ရုပ်ရှင်အများစုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှီအခိုကင်းသောအကြောင်းအရာများဖြင့်ပေါ့ပါးသောဂီတများဖြစ်သည်။ စဉ်တွင် Notre Dame ၏ Hunchback ထိုခေါင်းစဉ်များရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပြင်သစ်၏ဝတ္ထုကိုဗစ်တာဟူဂို၏အမည်ဖြင့်အခြေခံပြီးတပ်မက်ခြင်း၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်အပြစ်စသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့၊ အချို့သော Disney ကာတွန်းဂန္ထဝင်များသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများရှိသည်၊ သို့သော်ယင်းသည်အခြားအဆင့်တွင်ရှိသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Quasimodo (Tom Hulce) လို့ခေါ်တဲ့ပုံသွင်းခေါင်းလောင်းထိုးထားသူရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလက်ခံမှုကိုရရှိဖို့ကြိုးစားမှုအပေါ်အဓိကထားပါတယ်။ Esmeralda (Demi Moore) အမည်ရှိ Gypsy နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲကြုံတွေ့ရပြီးနောက် Quasimodo သည်သူ၏မကောင်းသောအုပ်ထိန်းသူထံမှသူမကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာထားရှိပြီးကမ္ဘာတွင်သူ့အတွက်နေရာလွတ်ထုတ်ပေးရမည်။ Notre Dame ၏ Hunchback လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး မှတ်မိလွယ်တဲ့တေးသံနှင့်အတူလွမ်းဆွတ် romp ပါပဲ။ Hulu ပေါ်မှတ်ဉာဏ်လမ်းကြောကိုလမ်းလျှောက်လိုက်ပါ။
နယူးယောက် - နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်။ ။ (L-R) သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သော Idina Menzel၊ Taye Diggs၊ Wilson Heredia၊ Tracie Thoms၊ Adam Pascal၊ Anthony Rapp နှင့် Rosario Dawson တို့၏? Rent? နယူးယောက်စီးတီးရှိ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်၊ တိုင်းရင်ပြင်၊ Virgin Megastore တွင်ပြသမည်။ (Paul Hawthorne / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၄၀ ။ အငှား
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၀၅
သရုပ်ဆောင် - Rosario Dawson၊ Tay Diggs၊ Wilson Jermaine Heredia၊ Jesse L. Martin၊ Idina Menzel, Adam Pascal, Anthony Rapp, Tracie Thoms
မည်သည့်လူကြိုက်များသည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကြီးအတွက် Broadway ဂီတသို့မဟုတ်၎င်းပြသမှုအတွက်ပြသသည့်ပြပွဲတစ်ခုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ သငျသညျ၏သစ္စာစောင့်သိပရိသတ်တွေထင်လျှင် နယူးယောက်တိုင်းမ် အရောင်းရဆုံးအရောင်းဆိုင်များသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးများကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်။ ဟောလိဝုဒ်သည်မှော်ပွားများရန်ကြိုးစားစဉ်နှစ်ပေါင်းများစွာအချစ်ဆုံးသရုပ်ဆောင်များနှင့်အတူသီဆိုခဲ့ကြသည့်ဘရော့ဒ်ဝေးပရိတ်သတ်များသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအုပ်စုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ Tony Award ဆုရဂီတ အငှား မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုလုံးအတွက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
၏ကြံစည်မှုနှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူတို့အဘို့ အငှား၊ Broadway ဂီတနှင့်၎င်း၏ရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များရှေ့တွင်နယူးယောက်မြို့တွင်ဖြစ်သည်။ မြို့တွင်း၌နေထိုင်သောသူငယ်ချင်းများသည်ဘဝ၏ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်ကပ်ရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများကြားတွင်၎င်းအားပညာရှင်ဆန်ဆန်နှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဇာတ်လမ်းသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Mark (Anthony Rapp) နှင့်ဂီတပညာရှင် Roger (Adam Pascal) တို့ကဲ့သို့သောတီထွင်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှသူတို့၏အိမ်ရှင်နှင့်တစ်ချိန်ကအခန်းဖော် Benny (Taye Diggs) အတွက်ငှားရမ်းမှုကိုပယ်ဖျက်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုများကိုယူဆောင်။ စင်မြင့်ဂီတမှပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်သော်လည်း၊ အငှား အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါပြwithနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရသည့်သူငယ်ချင်းများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ မူရင်းဘရော့ဒ်ဝေးသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ ၀ င်ခြောက် ဦး သည်သူတို့၏စွမ်းရည်များကိုမျက်နှာပြင်ကြီးသို့ယူဆောင်လာကြသောကြောင့်ပြပွဲ၏ပရိသတ်များဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနိုင်သည်။ သငျသညျပို။ ပင်ရှာနေလျှင် အငှား Hulu မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးနောက် Fox သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုပြုလုပ်မည်။
နောက်တစ်ခု:39 13 နာရီ
ARLINGTON, TX - ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်။ ။ မင်းသား John Krasinski သည် Dallas ရှိ Paramount Pictures ရုပ်ရှင်၏ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့တက်ရောက်သည်။ ၁၃ နာရီ - ဘန်ဂါဇီ၏လျှို့ဝှက်စစ်သားများ ?? AT ကိုမှာ
၃၉ ။ ၁၃ နာရီ - ဘန်ဂါဇီ၏လျှို့ဝှက်စစ်သားများ
သရုပ်ဆောင် - ဂျိမ်းစ် badge Dale၊ John Krasinski, Max Martini, Dominic Fumusa, Pablo Schreiber, David Denman, Matt Letscher, Toby Stephens, Alexia Barlier, Freddie Stroma, David Costabile
အစဉ်အဆက်ကတည်းက NBC ရဲ့ရယ်စရာလူကြိုက်များ sitcom အပေါ်ကိုးနှစ်ကြာအဆုံးသတ်ကတည်းက ရုံး ဂျွန်ခရစ္စနီကီသည်ရုပ်ရှင်တွင်အနာဂတ်အတွက်သတိရှိရှိကစားခဲ့သည်။ သူက Pixar tentpole ကိုသူ့အသံထုတ်ချေး Monsters တက္ကသိုလ်, အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည့်ကင်မရွန်ခွေ၏ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည် Aloha, နှင့်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည် အဆိုပါ Hollars ။ Box Office ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဆုများရာသီသိမ်းဆည်းရမိခြင်း၊ ၁၃ နာရီ Krasinski များအတွက်ထွက်ခွာမှတ်သား။
အကယ်၍ သင်သည် John Krasinski ကိုကင်မရာသို့တိုက်ရိုက်ကြည့်နေစဉ်စားပွဲခုံနောက်တွင်ထိုင်။ ထိုင်နေသည်ကိုသင်တွေ့ရလျှင်၊ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင်သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူကိုကြည့်ခြင်းကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ၁၃ နာရီ လစ်ဗျားနိုင်ငံဘန်ဂါဇီရှိအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွများကပစ်မှတ်ထားခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ခိုက်မှုများကိုခြေရာခံခဲ့သည်။ Mitchell Zuckoff ရဲ့နာမည်တူစာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးဒီရုပ်ရှင်ဟာနောက်ဆက်တွဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်သားတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးသူတို့အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။
၁၃ နာရီ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဟောလိဝုဒ်ရဲ့အများဆုံးမော်ကွန်းစစ်နှင့်ဘေးအန္တရာယ်ရုပ်ရှင်အချို့ကိုဖန်တီးခဲ့သူဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ဂလားပင်လယ်အော်ကနေလာပါတယ် အာမဂေဒုန်, ပုလဲဆိပ်ကမ်း, ပြီးနောက် ထရန်စဖော်မာ ရုပ်ရှင်ဂိမ်း။ အထူးသ, ၁၃ နာရီ သူ၏ယခင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများထက်များစွာအထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသောဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုသည်ဝေဖန်သူများ၏ချီးမွမ်းမှုကိုရရှိရန်နှင့်သူနှင့်အမေဇုန်၏မူလစီးရီးတွင်နောက်လာမည့်သူနှင့်ဂျွန်ခရစ္စနီကီတို့အကြားဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းမှုအသစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်စီမံခဲ့သော်လည်း တွမ် Clancy ရဲ့ဂျက်ရိုင်ယန် ။ သို့သော်ပထမ ဦး စွာသူတို့၏ Hulu ရထားနှင့်အတူတက်ပါ ၁၃ နာရီ ။
နောက်တစ်ခု:38. Madea ထောင်ကိုသွား
New York - ဖေဖော်ဝါရီ 18: Tyler Perry, New York City, 2009 ဖေဖော်ဝါရီလ 18 ရက်နေ့တွင် AMC Loews လင်ကွန်းစင်တာ၌ Tyler Perry ရဲ့ '' Madea ထောင်သို့သွား '' ၏ပြပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Brad Barket / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
38 ။ Tyler Perry ရဲ့ Madea ထောင်ကိုသွား
ဒါရိုက်တာ Tyler Perry
Tyler Perry၊ Derek Luke၊ RonReaco Lee၊ Keshia Knight Pulliam၊ Ion Overman၊ Tamela Mann၊ David Mann၊ Viola Davis၊ Vaness Ferlito၊ Sofia Vergara, Bobbi Baker, Jackson Walker, Robin Coleman တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်။
အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်၊ မယုံဘူး၊ Tyler Perry ရဲ့ Madea ဇာတ်ကောင်ဟာခေတ်သစ်အမေရိကန် zeitgeist ထဲကိုသူမရဲ့လမ်းကိုတံတောင်ဆစ်ပေးပြီးသူမဘယ်နေရာကိုမှသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ သူမသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် ငါကိုယ်တိုင်အားဖြင့်မကောင်းမှုအားလုံးကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ Madea သည်နှစ်များတစ်လျှောက် Tyler Perry ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ​​ခုတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Madea သည်သူမ၏ဒုတိယဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည် Boo 2! Madea ဟယ်လိုဝိန်းပွဲ၊ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့အမြတ်အများဆုံးအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကတော့ ၂၀၀၉ လို့ခေါ်တဲ့ဟာသဇာတ်ကားမှာပါ Madea ထောင်ကိုသွား။
In Madea ထောင်ကိုသွား ကောင်းပြီ, Madea (Tyler Perry) ဒါလုပ်ပေး ... သူမထောင်ကိုသွား။ သူမ၏မဆင်မခြင်ဒေါသထွက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပြissuesနာများကြောင့်မောင်းနှင်ထားသောကားမောင်းထွက်ပြီးနောက် Madea သည်အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်တွင်ပိတ်မိနေသည်။ Madea ၏ရိုင်းသောဆိုးရွားသည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ခရိုင်ရှေ့နေချုပ် Josh Hardaway (Derek Luke) သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။ ဂျော့ရှ်သည်ပြည့်တန်ဆာလူငယ်တစ် ဦး နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲသူဟောင်း Candace (Keshia Knight Pulliam) ကိုကူညီရမည်။
Madea ထောင်ကိုသွား ချက်ချင်းလက်ငင်းအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်ဝေဖန်သူများ၏ဝေဖန်မှုများကိုခံယူခဲ့သည်။ Madea ရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးမှာသူမရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအသှငျအပွငျကတည်းကနီးပါး 10 နှစ်အတွင်းခိုင်မာသွားမယ့်အဖြစ်နေဆဲ, ထိုဂိမ်း၏အနာဂတ်ကိုရှာမရဘူး။ Hulu ထက်အနည်းငယ်ပိုလိုအပ်သော Madea လိုအပ်သူများအတွက် screen ကိုကြီးကြီးမားမားပိတ်ထားသင့်သည်။ သူမသည်လာမည့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Madea မိသားစုအသုဘ 2018 ခုနှစ်တွင်, သင်သာသူမလာမယ့်သို့ရတဲ့ရဲ့အဘယ်အရာကိုဒုက္ခစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။
နယူးယောက် - စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် - (L-R) သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များသည် Richard Jenkins၊ John Magaro, Elizabeth Olsen နှင့် Josh Radnor တို့သည် ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့ရှိ Sunshine Landmark တွင် 'Liberal Arts' နယူးယောက်ပြပွဲသို့တက်ရောက်သည်။ (Rob Kim / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၁၂
ဒါရိုက်တာ: Josh Radnor
သရုပ်ဆောင် - Josh Radnor, Elizabeth လိရှဗက် Olsen, ရစ်ချတ် Jenkins, Allison Janney ဂျွန် Magaro, အဲလစ်ဇဘက် Reeser, ကိတ် Burton ရောဘတ် Desiderio, Zac Efron, Gregg Edelman
sitcom ကြယ်တစ်ပွင့်သည်သူတို့၏စစ်တမ်းကိုအသုံးပြုပြီး Indie ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးရန်ညွှန်ပြသည့်အခါ၎င်းတို့ရေးရန်လွယ်ကူသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sitcom ကြယ်များသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းအကြောင်းကိုဘာတွေသိသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်ဟာဒီအတွေးကျောင်းကိုစာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်၊ သင့်အမေနဲ့ဆုံတွေ့ပုံ' ယောရှု Radnor ။ ကိုးရာသီအတွက်သူဟာအချစ် Ted Mosby ကိုကံမကောင်းခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ဒုတိယကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့၊ ဒါရိုက်တာရုပ်ရှင်မှာတော့သူဟာအချစ်ဥာဏ်ရည်အတွက်အခြားကံမကောင်းတဲ့အခြားတေးသီချင်းကိုဖွင့်ခဲ့တယ်။
လစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာ ကြယ်များ Josh Radnor သည် Jesse Fischer ဖြစ်သည်။ သူသည်အချစ်ဆုံးပါမောက္ခ (Richard Jenkins) ၏အငြိမ်းစားပါတီအတွက်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရှိလစ်ဘရယ်အနုပညာကျောင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သော alma mater သို့နယူးယောက်စီးတီးမှကောလိပ် ၀ င်ခွင့်အတွက်အကြံပေးအဖြစ် ၃၀ - ရာထူးမှအကြံပေးသူဖြစ်သည်။ ထိုတွင်ရှိစဉ် ၁၉ နှစ်အရွယ် Zibby (အဲလစ်ဇဘက်အိုလန်) အမည်ရှိဒရာမာဇာတ်ကားနှင့်သူတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူကသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကွာဟမှုရှိနေသော်လည်း Zibby နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖတ်ခြင်းကဲ့သို့ဘာမျှမလွယ်ကူသကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များလည်းရှုပ်ထွေးလာသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ပညာရှင်များ၏ရိုးရှင်းသောနေ့ရက်ကာလအဘို့လွမ်းဆွတ်မှု၏ရုပ်ရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ချီးကျူးသောဝေဖန်သူများကနေအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှပြသခဲ့သည်။ သို့သော်အကောင်းဆုံးအချိန်များ လစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာ သူမသွားသည့်နေရာတိုင်းတွင်ထွန်းလင်းတောက်ပသည့် Co- ကြယ်ပွင့် Allison Janney ၏ယဉ်ကျေးစွာနှင့် Zac Efron ထံမှထပ်တလဲလဲနည်းနည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ယဉ်ကျေးလာ။ မိမိကိုယ်ကိုအလိုလိုက်ခြင်းနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာကိုနှစ်သက်ခြင်းစသောရုပ်ရှင်များအတွက်အက်ဖရန်မှလိုက်လျောညီထွေစွာကစားရသောအချိန်ကာလသည်ကြိုဆိုရုံထက်မကပါ။ Hulu ၌ဤလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်ကိုလက်လွတ်မနေပါနှင့်!
နောက်တစ်ခု:မန်ဟက်တန်တွင် 36. အိမ်ဖေါ်
MADRID, SPAN - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ - မင်းသမီးနှင့်အဆိုတော်ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်သည်စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့၊ Kinepolis ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်သူမ၏ရုပ်ရှင် 'Maid In Manhattan' ရုပ်ရှင်၏စပိန် premiere သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Carlos Alvarez / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Wayne Wang မှရိုက်ကူးသည်
Ralph Fiennes၊ Natasha Richardson, Stanley Tucci၊ Tyler Posey၊ Frances Conroy၊ Chris Eigeman၊ Amy Sedaris, Marissa Matrone, Priscilla Lopez နှင့်အခြားသရုပ်ဆောင်များပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမည်။
'90s နှင့်အစောပိုင်း' '00s နှောင်းပိုင်းကာလအတွင်း, ရင်ခုန်စရာဟာသအားလုံးဒေါသအမျက်ခဲ့ကြသည်။ လအနည်းငယ်တိုင်းလိုလို၊ မတူတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိလိုက်တာပါ။ ဒါကဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ပေါင်းတနင်္ဂနွေပွဲ ဦး ထွက်ပွဲအတွက်နောက်ထပ် blockbuster စူပါဟီးရိုးဒါမှမဟုတ်အာကာသမော်ကွန်းတိုက်တောင်းဆိုနေသလိုပဲ။ ဒါကကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်အခါရွှေခေတ်၌ရန်ကဲ့သို့သူတို့ဟာ rom-coms လုပ်မပြောအားလုံးပါပဲ မန်ဟက်တန်၌အိမ်ဖော် မျက်နှာပြင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်သည်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမန်ဟက်တန်ရှိအဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်တွင်အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသည့်ကြင်ဖော်မဲ့မိခင် Marisa Ventura နှင့်နယူးယောက်မြို့ဇာတိဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာကုတ်အင်္ကျီတစ်စုံတစ် ဦး ကသူမကိုမှားယွင်းစွာစွန့်ခွာသောအခါ Marisa သည်ခရစ်စတိုဖာမာရှယ်၏ (Ralph Fiennes) လောကရှိпапသာရာဇီနှင့်နိုင်ငံရေးလောကတွင်နေရာယူသွားသည်။ ခရစ္စတိုဖာသည်မာရီယာနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုသူမအိမ်ဖော်၊ ချမ်းသာသောဟိုတယ် guest ည့်သည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သူတို့၏ရင့်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
မန်ဟက်တန်၌အိမ်ဖော် Box Office ၏ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၅၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် (ထိုစဉ်ကဂျေ L0 ဟုခေါ်ဝေါ်) သည်ရုပ်ရှင်အပြင်တေးဂီတတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်ကချစ်စရာကောင်းရတာလဲ၊ ပြီးတော့ Freeform ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်တာတိုင်းချစ်မြတ်နိုးရခြင်းအကြောင်းအရင်းကိုမင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဒဏ္Johnာရီဆရာဂျွန် Hughes ကဒီဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးခဲ့တာကြောင့်ပဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီ Hulu အပေါ်ထပ်မံကြည့်ရှုရန်တောင်းပန်ရဲ့တ ဦး တည်းရင်ခုန်စရာဟာသဖြစ်ပါတယ်။
HOLLYWOOD, CA - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ - မင်းသမီးဂျနီဖာလောရင့်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဟောလိဝုဒ်တွင် Kodak ပြဇာတ်ရုံ၌ကျင်းပသည့် ၈၃ ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲသို့တက်ရောက်သည်။ (John Shearer / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၃၅ ။ ဆောင်းရာသီရဲ့အရိုး
By: Debra Granik
သရုပ်ဆောင် - ဂျနီဖာလောရင့်၊ ဂျွန်ဟော့ကင်း၊ Lauren Sweetser, Garret Dillahunt, Dale Dickey, Shelley Waggener, Kevin Breznahan, Ashlee Thompson, Tate Taylor, Sheryl Lee, Cody Shiloh, Isaiah Stone
ဂျနီဖာလောရင့်သည်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မဟုတ်သည့်အချိန်ရှိခဲ့သည်ကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ သူမသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းအတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်သူမမြင်ကွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုမှတ်မိရန်ခက်ခဲသည်။ The Hunger Games Katniss Everdeen အနေဖြင့်လောရင့်သည်သူမ၏ဟောလိဝုဒ်တွင်ပွဲ ဦး ထွက်ပါဝင်ခဲ့သည် ဆောင်းရာသီအရိုး သူမ၏ပထမဆုံးအော်စကာဆုကိုဆင်းသက်စေသည့်မှောင်မိုက် Indie ဒရာမာ။
လောရင့်စ်သည် guest ည့်သည်အငယ်စားများကိုမျက်နှာပြင်သေးသေးလေးထဲ ဖြတ်၍ (ဥပမာမင်းသမီး Emma Stone ၏ကြယ်ပွင့်အလှည့်) လွယ်ကူပါတယ် ) သူမအတွက်ပထမဆုံးသောသရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ waves နှင့်အတူလှိုင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် ဆောင်းရာသီရဲ့အရိုး ။ Ree Dolly, Ozark ဆယ်ကျော်သက်တုန်းကနှုတ်ဆိတ်နေသောမိခင်နှင့်ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်ဆက်ဆံခဲ့သူ Lawrence သည်သူမနှင့်သူ့မိသားစုအတွက်အခက်အခဲများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်စံနှုန်းများကိုစိန်ခေါ်သည့်အားကောင်းသောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီအရိုး ဒေါ်လာ ၂ သန်းသာဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်သည်ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ အချို့က၎င်းကိုအမျိုးသမီးရေးရာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီး၎င်းကို၎င်း၏နှစ်၏အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းရုပ်ရှင်သည်လောရင့်စ်အားအကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်အကယ်ဒမီဆုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူမအနိုင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည် ငွေအနားသပ်များနဲ့ဇာတ်ညွှန်းစာအုပ် ။ မင်းဂျနီဖာလောရင့်စ်ကိုကြယ်တစ်လုံးသို့စတင်စေသည့်ဖျော်ဖြေမှုကိုသင်မျက်မြင်မတွေ့ရသေးပါက Hulu သို့ကူးပြောင်းလိုက်ပါ။
လန်ဒန်, အင်္ဂလန် - ဇန်နဝါရီ ၂၅ - Justin Fletcher သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့၊ Vue Leicester ရင်ပြင်တွင် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ Vue Leicester ရင်ပြင်၌ 'Shaun The Sheep Movie' ၏ဥရောပ Premiere သို့တက်ရောက်သည်။ (Tim P. Whitby / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ဒါရိုက်တာ Mark Burton နှင့် Richard Starzak တို့ဖြစ်သည်
သရုပ်ဆောင် - Justin Fletcher၊ John Sparkes, Omid Djalili, Kate Harbour, Richard Webber, Tim Hands, Simon Greenall, Emma Tate, Henry Burton, Dhimant Vyas နှင့်အခြားသူများ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဒီမှာ Hulu ရုပ်ရှင်ကားမှာနောက်ထပ်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားကလေးများ၏ရုပ်ရှင်နှင့်မတူသည်။ ကျနော်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့၏သွေးကြောထဲမှာမိသားစုအကြိုက်ဆုံးနေသားတကျပါပဲ အဲလာ Enchanted နှင့် Notre Dame ၏ Hunchback, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများအတွက်အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုခေတ်တွင် stop-motion hit ကဲ့သို့ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသောအရာအတွက် format ကိုရောစပ်ခြင်းသည်မမှားပါ။ သိုးရုပ်ရှင် ။
တီထွင်ခဲ့သောဗြိတိသျှ stop-motion ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်အခြေခံသည် Wallace & Gromit ရိုင်းစိုင်းသော Nick Park၊ သိုးရုပ်ရှင် အဆိုပါ titular သိုးနှင့်သူ၏သိုးစု၏လှောင်ပြောင်သရော်မှုများဆက်လက်။ Shaun the Sheep သည် Wallace နှင့် Gromit တို့နှင့်အတူသူ၏ပထမဆုံးအသွင်အပြင်ကိုစတင်ခဲ့သည် နီးကပ်သောရိတ် ဒါပေမယ့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ, shenanigans သူနှင့်သူ၏သိုးပိုင်သည်။ Shaun နှင့်သူ၏သိုးအုပ်သည်သူတို့၏လယ်သမားကိုအလုပ်မှထွက်ရန်အိပ်လိုက်ပြီးနောက်သူသည်မြို့ထဲသို့တက်သွားပြီး Shaun မှကယ်ဆယ်ရန်လိုအပ်သည်။
သိုးရုပ်ရှင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပရိသတ်များကချက်ချင်းချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ယင်း၏လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများထက် ပို၍ အရေးကြီးသောဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မှာ၊ ရုပ်ရှင်သည်အကောင်းဆုံးကာတွန်းရုပ်သွင်ဆုအတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ Shaun the Sheep အတွက်နောင်လာမည့်နောက်ဆက်တွဲမျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်သို့ခုန်ချရန်ပြင်ဆင်ပါ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်သူသည် Hulu အပေါ်သူ၏ရူးသွပ်မှုနှင့်အတူရယ်မောပါလေ။
ဒါရိုက်တာ Antoine Fuqua
သရုပ်ဆောင် - Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Haley Bennett, Peter Sarsgaard, Luke Grimes, Matt Bomer, Jonathan Joss, Cam Gigandet, Sean Bridgers, Billy ကွပ်မျက်, မာကု Ashworth
ရုပ်ရှင်ကြယ်တစ်ပွင့်ထက်ဘာကောင်းလဲ။ ရုပ်ရှင်ကြယ်နှစ်ပွင့်နှင့်ထို့နောက်အချို့။ Denzel Washington မှရှေ့တန်းတင်ထားသောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်လူအများအပြားရရှိခြင်းသည်အခက်ခဲဆုံးရောင်းဝယ်မှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Chris Pratt ကိုရောနှော။ ပေါင်းထည့်ပါ၊ ၎င်းသည် Butts များထိုင်ခုံတွင်နေရာထိုင်ခင်းနီးပါးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ခက်ခဲနှင့်အတူရောင်း ခုနစ်ပါး ? ၎င်းသည်စူပါဟီးရိုးများနှင့်ဝေးသော၊ နဂါးငွေ့တန်းများမှလာကြသောအခြားသူရဲကောင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည့်အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမြို့ကိုသက်သေပြ, ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ကျင်းပခဲ့တယ် ဟုတ်တယ် ငါတို့နှစ်ယောက်အတွက်လုံလောက်တဲ့ကြီးတွေ။
၁၉၅၄ ခုနှစ်ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံသည် ဆာမူရိုင်း ၇ ၁၉၆၀ တူနာမည်တူဇာတ်ကားကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ခုနစ်ပါး ခေတ်သစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းအသွင်ဖြင့်ဇာတ်လမ်းကိုအနည်းငယ်မျှဝေသည်။ Emma Cullen (Haley Bennett) သည်မုဆိုးဆာ Sam Chisolm (Denzel Washington) ကိုငှားရမ်း။ ရွှေဆာနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းရှင် Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ရင်ဆိုင်ရသည်။ မကြာခင်မှာပဲ Sam ဟာ Old West ရဲ့သမာဓိကိုခုခံကာကွယ်ဖို့သေနတ်သမားတွေရဲ့အက်ကွဲအုပ်စုကိုအတူတကွခွဲထုတ်လိုက်တယ်။
ခုနစ်ပါး မည်သည့်နည်းအားဖြင့် 2016 ၏ Blockbuster အကြောင်းကိုပြောသောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျိုးနွံအောင်မြင်မှုနှင့်လျောက်ပတ်သောပိုက်ဆံလုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ Wild West Avengers သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကဲ့သို့သောဂိမ်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုပါက၎င်းရုပ်ရှင်သည်အနောက်နိုင်ငံများကိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကိုမတွေ့ရသေးသော်လည်းပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ကနောက်ထပ်စုံတွဲတစ်တွဲနာရီကိုကောင်းစွာကျိုးနပ်ပါတယ်, နှင့် Hulu မှကျေးဇူးတင်စကား, ထိုဟောငျးအနောက်ကာကွယ်ရေးထက်ပိုမိုလွယ်ကူအလုပ်ပါပဲ။
နောက်တစ်ခု:32. မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နာမည် Doris ပါ
နယူးယောက် - မတ် ၇ ရက်။ ။ (LR) မင်းသား Max Greenfield၊ မင်းသမီး Sally Field၊ မင်းသမီး Natasha Lyonne၊ မင်းသမီး Tyne Daly နဲ့ဒါရိုက်တာ Michael Showalter တို့ဟာနယူးယောက်မြို့လမ်းမကြီး attraction မှအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့် 'Hello, My My Is Is Doris' ဖျော်ဖြေပွဲသို့ရောက်ရှိသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံ Society က
၃၂ ။ ဟယ်လိုငါ့နာမည် Doris
Sally Field၊ Max Greenfield၊ Bet Behrs၊ Tyne Daly၊ Wendi McLendon-Covey၊ Stephen Root၊ Elizabeth Elizabeth, Peter Gallagher, Natasha Lyonne, Isabella Acres, Kumail Nanjiani, Kyle Mooney နှင့်အခြားသရုပ်ဆောင်များပါဝင်သည်။
သငျသညျ Hulu အပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ခေတ်သစ်ရင်ခုန်စရာဟာသရှာနေလျှင်, rom-coms ယနေ့ပေမယ့်မျိုးသုဉ်းနေသောကြောင့်, ကံကောင်းပါစေ။ သင်တို့မူကားထက်ပိုကောင်းတဲ့ခေတ်သစ်ရင်ခုန်စရာဟာသကိုရှာဖွေ Hard- ဖိလိမ့်မယ် ဟယ်လိုငါ့နာမည် Doris streaming များ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောရာနှင့်ချီသောရုပ်ရှင်များထဲတွင်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က Sally Field ဦး ဆောင်သောရုပ်ရှင်သည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ငါဒါကြောင့်ဟုဆိုသည်သောကြောင့် ဒါမှမဟုတ် အဲဒါခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ် ။ ဒါပေမယ့်နှလုံးတစ်တန်နဲ့ Indie တောက်တောက်ကတော့သူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တနဲ့မတူဘဲအရှုံးသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟယ်လိုငါ့နာမည် Doris အကယ်ဒမီဆုရှင်ဆုရှင် Sally Field သည်သူမအမေဆုံးသွားသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသည့်ထူးခြားသောအချက်အလက်ထည့်သွင်းသူလုပ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်, Doris သူမဂျွန် (မက်စ် Greenfield) အမည်ရှိငယ်ရွယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်တစ် ဦး အရူးအမူးတယ်ရဲ့တွေ့ရှိ။ ဒေါ်ရစ္စသည်ဂျွန်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်ရန်သူမ၏ဆက်သွယ်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်သူသည်ဘရွတ်ကလင် (ဗက် Behrs) နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်းသိသောအခါသူမမျှော်လင့်ချက်အားလုံးပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ တောင်မှထို့နောက်, Doris အလွန်နောက်ဆုံးနှလုံးနွေးထွေးသောဒုတိယသည်အထိသူမ၏နှိပ်စက်ခြင်းအပေါ်မျှော်လင့်ချက်အရှုံးမပေးပါဘူး။
ကစီစဥ်ညွှန်ကြားသည် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ စာရေးဆရာ Michael Showalter, ဟယ်လိုငါ့နာမည် Doris ပရိသတ်ကိုသူ၏အတိတ်ကလုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောဟာသနှင့်အတူရိုက်နှက်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ထက်ကျော်လွန်။ likable ဘယ်တော့မှသူကို Sally ဖျော်ဖြေမှုနှင့်အတူ, သင်္ဘောကိုစတီယာရင်, ကတစ် ဦး မနိုင်သလားရုပ်ရှင်ပါပဲ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရရှိ။ 14 ကစား၎င်း၏ $ 1 သန်းဘတ်ဂျက်လုပ်, ဒီမှာကစားပွဲမှာအနိုင်ရပုံသေနည်းရှိတယ်ဆိုတာသက်သေပြ။ ထည့်ပါ ဟယ်လိုငါ့နာမည် Doris ကြည်နူးဖွယ်နေ့စွဲညသို့မဟုတ်ရုံတစ်ကိုယ်တော်ရုပ်ရှင်ညဉ့်အဘို့သင့်စောင့်ကြည့်စာရင်းမှ - Hulu စစ်ကြောစီရင်တော်မူပါဘူး။
နောက်တစ်ခု:31. ဝီစကီတန်ဂို Foxtrot
၃၁ ။ ဝီစကီတန်ဂို Foxtrot
ဒါရိုက်တာ: Glenn Ficarra နှင့် John Requa
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် - Tina Fey၊ Margot Robbie၊ Martin Freeman၊ Christopher Abbott၊ Billy Bob Thornton၊ Alfred Molina, Sheila Vand, Nicholas Braun, Steve Peacocke, Evan Jonigkeit, Scott Takeda, Josh Charles, Cherry Jones, Sterling K. Brown
Tina Fey မတတ်နိုင်သောအရာရှိပါသလား။ နှစ်များတစ်လျှောက်သူသည်ကမ္ဘာ့ဘဝကိုစာရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Weekend Update ကိုကျောက်ချရပ်နားခဲ့သည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်၊ သူမ၏ sitcom အပေါ် ဦး ဆောင်မင်းသမီး ကျောက် ၃၀ သူမ၏အတူတကွသရုပ်ဆောင်ထားသောအခန်းကဏ္ two နှစ်ခုနှင့် BFF Amy Poehler, နှင့်သူ၏စာအုပ် 'စာမျက်နှာများနှင့်အတူထင်ရှားကျော်ကြားလာမှုတို့ကိုပါပြသခဲ့သည်။ Bossypants ။ Tina Fey မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသွားပါစေ၊ အနီးကပ်နောက်ကို လိုက်၍ ရယ်မောပါက၎င်းသည် ၂၀၁၆ စစ်ပွဲ၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည် ဝီစကီတန်ဂို Foxtrot ။
အမည်ရအမေရိကန်သတင်းစာဆရာ Kim Barker ရဲ့စာအုပ် 'အပေါ်အခြေခံပြီး တာလီဘန်အပြောင်းအလဲ - အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်ပါကစ္စတန်ရှိထူးဆန်းသည့်နေ့ရက်များ၊ ဝီစကီတန်ဂို Foxtrot သူမ၏အတွေ့အကြုံများကိုစစ်သတင်းထောက်တစ် ဦး အဖြစ်သတင်းထောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ Fey သည်ကေဘယ်ကြိုးသတင်းသတင်းထောက် Kim Baker ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတာ ၀ န်ဖြင့်နောက်အဆင့်သို့တက်ရန်အသင့်ရှိနေသည်။ မမျှော်လင့်ဘဲသူသည်သူမရှာဖွေနေသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပေးသောကြိုးစားအားထုတ်မှုကြားတွင်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်အိမ်ပြန်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သော်လည်း ဝီစကီတန်ဂို Foxtrot သင် Tina Fey (ကပင် breakeven မပြုခဲ့) ၏အကြိုက်များမှသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်ထွက်ပြေးသွားသောငွေရှာသူမဟုတ်ပါ၊ ၎င်း၏ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားမှုသည်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစစ်ကဲ့သို့သောပိုမိုလေးသောဘာသာရပ်များကိုသတိထားသူများအတွက်၊ Tina Fey နှင့်သူမ၏မကြာခဏပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သော Robert Carlock တို့သည်ဘဝ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေရာတစ်ခုရှာတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောသဘာဝကိုယူဆောင်လာကြသည်။ သငျသညျအကြီးအသွန်းနှင့်အတူအချို့သောရယ်မောခြင်းများအတွက်စျေးကွက်အတွက်နေလျှင်, underrated ဟာသ Hulu အပေါ်တစ် ဦး နာရီပေးရသေချာပါစေ!
နောက်တစ်ခု:30. Ocean's Eleven
398145 16: မင်းသားဂျော့ခ်ျကလူနီ (L), Matt Damon (C) နှင့်အန်ဒီ Garcia က, Los Angeles မြို့, CA. တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 2001 ဒီဇင်ဘာ 5, 2001 ၏ရုပ်ရှင် 'Ocean's Eleven' ၏ Premiere တက်ရောက်ခဲ့သည် (Vince Bucci / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၃၀ သမုဒ္ဒရာရဲ့ Eleven
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၀၁
ဒါရိုက်တာ: Steven Soderbergh
သရုပ်ဆောင် - ဂျော့ခ်ျကလူနီ၊ ဘရက်ဒ်ပက်ထ်၊ Matt Damon၊ ဒွန်ချီဒယ်၊ ဘာနီမက်၊ စကော့ကာန၊ ကာဇီအက်ဖလက်၊ ကားလ်ရိုင်နာ၊ အဲလတ်ထ်ဂိုလ်လ်၊ အက်ဒီဂျမီဆင်၊ ဆော်ဘိုကွင်၊ အန်ဒီဂါစီယာ၊
ဒီဗီဆာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်အချို့ရှိပါတယ်။ သင်ထွက်မလာသောအခါဘ ၀ ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသင်မမှတ်မိနိုင်ပါ။ ထည့်ပြီးစဥ်းစားပါက သမုဒ္ဒရာရဲ့ Eleven ဘဏ်ကိုဖျက်စီးပစ်ပြီးအောင်မြင်သောဂိမ်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်းသည်သင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောနှစ်တစ်နှစ်ရိုက်ကူးခဲ့သောရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက်ရုပ်ရှင်ကိုအမှန်ပင်အရည်အချင်းပြည့်မီစေသည်။ ထိုထက်ပိုသောအရာကဖန်တီး / ဟောလိဝုဒ်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်အချို့ကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆုပေးပွဲရာသီနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီသင်္ဘောသားပတ်လည်ရှိသကဲ့သို့ပျင်းစရာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့က (ဂျော့ခ်ျကလူနီရဲ့နောက်ပြောင်မှုများအကြောင်းမကြားဖူးဘူးလား?) ကင်မရာကိုဖြတ်ပြီးပြန်ပေးဆွဲခံရတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သူတို့၏လူဆိုးဂိုဏ်းဝင်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာရဲ့ Eleven တစ် ဦး unbeatable blockbuster ။ ထိုရုပ်ရှင်သည် George Clooney ကို Danny Ocean အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးသူ၏နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အတွက်လွင့်မျောသွားအောင်လေ့ကျင့်ထားသူဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများရှိသောသူငယ်ချင်းများကို Las Vegas တွင်တစ်စုံတစ်ရာဆွဲယူရန်နှင့် jackpot ကိုရိုက်ခြင်းထက်ပိုက်ဆံ ပိုမို၍ အိမ်သို့ပြန်သွားရန်သူ့ကိုမစုဆောင်းနိုင်ပါ။
နာမည်တူ Rat Pack ရုပ်ရှင်နှင့်လေးစားခံရသည့်ဒါရိုက်တာ Steven Soderbergh မှ အခြေခံ၍ သမုဒ္ဒရာရဲ့ Eleven အတူတက်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးအတွေ့အကြုံကိုစတင်ခဲ့သည် သမုဒ္ဒရာဆယ်နှစ် နှင့် သမုဒ္ဒရာဆယ်သုံး ။ ဒါက Danny သမုဒ္ဒရာအစဉ်အဆက်အိပ်မက်မက်ခြင်းထက်လမ်းပိုပိုက်ဆံပါပဲ။ သို့သော်အကောင်းဆုံးသောအခါလာသေးသည် သမုဒ္ဒရာရှစ် Sandra Bullock ဦး ဆောင်သော All- အမျိုးသမီး reboot, လာမည့်နွေရာသီရုပ်ရှင်ရုံတာမျိုး။ ယခုအဘို့, Hulu အပေါ်မူရင်းနှင့်အတူထုတ်ဝေအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပါ။
နောက်တစ်ခု:29. 10 Cloverfield လိန်း
New York, NY - မတ် 08: (L-R ကို) ဒန် Trachtenberg ဂျွန်ဂွတ်ဒ်မန်း, မာရိ Elizabeth လိရှဗက် Winstead ဂျွန် Gallagher ဂျူနီယာနှင့် J.J. အာဗြံသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၈ ရက်၊ နယူးယောက်စီးတီးရှိ AMC Loews Lincoln Square 13 ပြဇာတ်ရုံ၌ '10 Cloverfield Lane 'New York Premiere သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Michael Loccisano / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂၉ ။ 10 Cloverfield လိန်း
သရုပ်ဆောင် - John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. Bradley Cooper, Suzanne Cryer
အသစ်သောမူရင်းရုပ်ရှင်သည် box office တွင်ပြသခြင်းနှင့်နံပါတ်များစွာတင်သောအခါသင်ကသံပူပြင်းသည့်အချိန်တွင်ဟောလိဝုဒ်ကိုရိုက်နှက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲထုတ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ဘယ်တော့လဲ ကလူ ခိုင်မာသောအဖွင့်နှင့်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူ ဦး ညွှတ်အခြား entry ကိုလျင်မြန်စွာနောက်ကွယ်မှမလိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်နောက်တစ်ခုအတွက်နောက်ထပ်ရှစ်နှစ်နီးပါးအချိန်ယူရတယ်၊ အဲဒါကသင့်တော်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတောင်တောင်မှမဟုတ်ဘူး။ 10 Cloverfield လိန်း စကြာ ၀ universeာတစ်ခုတည်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဇာတ်ကြောင်းဆက်ခံသူမဖြစ်နိူင်သော်လည်း၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းခြေရာအတိုင်းလိုက်နာသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်၏တွေ့ရှိခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်စတိုင်ကိုပြန်ပြောမယ့်အစား, 10 Cloverfield လိန်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုမြေအောက်အတွက်တတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ Michelle (Mary Elizabeth Winstead) သည်ယာဉ်မတော်တဆမှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးသူမမှာ Howard (John Goodman) နှင့် Emmett (John Gallagher Jr. ) နှင့်လူနှစ်ယောက်အတူတကွဘန်ကာထဲတွင်အတူရှိနေခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Howard ကဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘန်ကာတွင်မြေအောက်မထားရှိလျှင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲမီရှယ်လ်ကသူမအမှန်တရားကိုမသိမချင်းသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
10 Cloverfield လိန်း ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်မှထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဟာသနှင့်ထူးဆန်းခြင်းစသည့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အရာများပါ ၀ င်သည်။ ကလူ စကြဝာ။ J.J. မှထုတ်လုပ်သောအဆိုပါရုပ်ရှင်, Abrams နှင့် La La Land စာရေးဆရာဒါရိုက်တာ Damien Chazelle ရေးသားသောကြောင့်အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်၏နောက်ထပ်အရစ်ကျအတွက်တံခါးကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိခိုက်မှုသည်မည်သည့်အရိပ်အယောင်မျှမဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ချမ်းတုန်မှုများကို Hulu မှစစ်ဆေးပါ။
ဖြန့်ချိသည့်နှစ် - 1999
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: အလက်ဇန်းဒါး Payne
သရုပ်ဆောင် - မMatthewဲ Broderick, Reese Witherspoon, Chris Klein, Jessica Campbell, Phil Reeves, Molly Hagan, Colleen Camp, Nicholas D'Agosto နှင့်အခြားသူများ
မြင်ဘူးသောသူတို့အဘို့ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်၎င်း၏ကြီးမြတ်နားလည်, သင်ကဒီစာရင်းတွင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျန်ရှိနေသေးသောရုပ်ရှင်များကိုအနိမ့်ဆုံးအကန့်အသတ်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်ကိုသိရှိပါ။ (အခြား Reese Witherspoon ဂန္ထဝင်သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ သို့သွားခဲ့သည်) လူကြိုက်များသောအကြိုက်ဆုံးအနက်ရောင်ဟာသတွင် Witherspoon သည်မပျက်ဆီးနိုင်သောနှင့်ရက်စက်သော Tracy Flick အနေဖြင့်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အထင်ရှားဆုံးဟာသစွမ်းဆောင်ချက်ကိုပေးသည်။ အဲလ်ဝုဒ်ကကိတ်မုန့်ကိုအမြဲယူသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆင်ခြေဖုံး Nebraska အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ယင်း၏ပြဇာတ်တွင်ပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများ၏ကိုယ်ခန္ဓာရွေးကောက်ပွဲကိုအဓိကထားသည်။ လူမှုရေးလေ့လာမှုများသင်ကြားရေးဆရာဂျင်မ်မက်လာလစ်စတာ (မBroဲဘရွတ်ဒစ်) သည်သူ၏အိမ်ထောင်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝပြိုကွဲချိန်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Tracy Flick သည်သူမ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုများ၊ knucklehead Paul Metzler (Chris Klein) နှင့်သူပုန် Tammy Metzler (ဂျက်စီကာကမ့်ဘဲလ်) တို့အားသူမအမြဲတစေရည်မှန်းချက်ရှိသည့်ထိုချုပ်ရိုးများကိုရွေးချယ်သည်။ ဂျင်မ်နှင့်ထရေစီတို့သည်အလွန်ခါးသီးလှသည့်အထိအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ထိုရုပ်ရှင်သည် Reese Witherspoon အားဟာသသို့မဟုတ်ဂီတဖြင့်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်ပထမဆုံးရွှေတံဆိပ်ဆုနှင့်အကောင်းဆုံး Adapted ဇာတ်ညွှန်းအတွက်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် Alexander Payne ကိုရရှိခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အတွက်လွတ်လပ်သော ၀ ိညာဉ်ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ Box Office တွင်ဗုံးခွဲမှုများရှိခဲ့သော်လည်းအစဉ်အဆက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၎င်း၏ Criterion Collection ဖြန့်ချိမှုကပြတ်လပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Hulu မှာလုပ်နိုင်တဲ့အရူးရုပ်ရှင်လေးနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး Flick ကိုဘာကြောင့်ရွေးသင့်တာလဲဆိုတာလေ့လာပါ။
နောက်တစ်ခု:၂၇။ Star Trek Beyond
ပေကျင်း၊ တရုတ် - ၁၈ သြဂုတ်။ အဆိုတော် Jason Zhang (L2)၊ Zachary Quinto (L3), Zoe saldana (L4), ဒါရိုက်တာ Justin Lin (L5), Chris Pine (L6), Simon Pegg (R4), Rob Moore (R2) ၂၀၁၆ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘေဂျင်းရှိ Indigo Mall တွင် Paramount Pictures ခေါင်းစဉ် Star Star Trek Beyond ၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့တက်ရောက်သည်။ (Paramount ရုပ်ပုံများအတွက် Emmanuel Wong / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂၇ Star Trek Beyond
ဒါရိုက်တာ Justin Lin
သရုပ်ဆောင် - Chris Pine၊ Zachary Quinto၊ Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho, Anton Yelchin, Sofia Boutela, Idris Elba, Joe Taslim, Lydia Wilson၊
ဤတွင်အတွက်အချို့ကောင်းသောသတင်းပါပဲ Star Trek ပရိတ်သတ်များ: Hulu တိုင်းရှိပါတယ် Star Trek ရုပ်ရှင်အစဉ်အဆက်, ထိုသို့အစဉ်အဆက်ရုပ်ရှင်ရှိသည်ပါဘူးလျှင်, သူကတော်တော်လေးနီးကပ်လာပါတယ်။ အဟောင်းတွေချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရုပ်ရှင်ကနေအသစ်ကကျောင်းက reboot ဂိမ်းရန်, streamer မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ဖြစ်အံ့သောငှါမဆိုရုပ်ရှင်မာရသွန်အဘို့အ clutch အတွက်လာမယ့်အားဖြင့်မည်သည့် Trekkie ရဲ့စိတ်နှလုံးမှလမ်းကိုသိတယ်။ သို့သော်ဤစာရင်းပြုစုသောတ ဦး တည်း, အများဆုံးဖိအားပေးမှုရဲ့တ ဦး တည်း, 2016 ရဲ့စီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် entry ကိုဖြစ်ရမည် Star Trek Beyond ။
2009 ရဲ့ကနေဆက်လက် Star Trek နှင့် 2013 ခုနှစ် Star Trek အမှောင်ထုထဲသို့, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအလယ်အလတ် blockbuster Star Trek Beyond လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကမ္ဘာသစ်သို့ပုံပြင်ယူသည်။ အာကာသအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်နိုင်ငံခြားပိုင်နက်နယ်မြေများကိုပျက်ကျရသည့်အခါသင်္ဘောသားသည်သူ၏သားကောင်များကို Sanderson ညီအစ်မများအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားသည့်ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ဖြစ်သည့် Krall (Idris Elba) နှင့်တွေ့သည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်တက်ကြွ) ။ မကြာခင်မှာပဲ Kirk (Chris Pine) နဲ့ Spock (Zachary Quinto) ဟာဂြိုလ်သားနဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကနေထွက်ခွာဖို့ဂြိုလ်သားတွေနဲ့တိုက်ရမယ်။
Star Trek Beyond အထူးသဖြင့်လူစည်ကားသောနွေရာသီကာလအတွင်းယင်း၏ ဦး ထုပ်ကိုလက်စသတ်ခြင်း၊ ဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်း, ရုပ်ရှင်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်အသစ်သောစီးရီးအတွက်အနိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်း entry ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်, သင်မူကား, သင်နေဆဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း $ 340 သန်းအတွက် raking သည့်အခါပြောပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အရာပရိသတ်များနှင့်ဝေဖန်သူများကကျွန်ုပ်တို့၏မာရသွန်ပြေးရန်အပျော်အပါးအတွက် Hulu အပေါ်ရုပ်ရှင်များပိုမိုလွှင့်ရန်လမ်းခင်းပေးသောနောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ကိုချီးကျူးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်စစ်ဆေးပါ Star Trek လေ့လာရေးခရီးနှင့်သာယာဝပြောတဲ့။
နောက်တစ်ခု:26. 50 ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲများ
WESTWOOD - ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Westwood ရှိ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် Mann Village ၌မင်းသမီး Drew Barrymore နှင့်မင်းသား Adam Sandler တို့သည် '50 First Dates '၏ပြသမှုသို့ရောက်ရှိသည်။ (Vince Bucci / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂၆ 50 ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲများ
ညွှန်ကြားသည် - Peter Segal
သရုပ်ဆောင် - Adam Sandler၊ Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Blake Clark, Lusia Strus, Dan Akroyd, Amy Hill, Allen Covert, Missi Pyle, Maya Rudolph, Kevin James
မြေပဲထောပတ်နှင့်ဂျယ်လီ၊ မက်ကာနီနှင့်ဒိန်ခဲ၊ ပဲစေ့များနှင့်မုန်လာဥ၊ အာဒံစဒဲလာနှင့်ဒရူဘာရီမီတို့အတူတကွပိုမိုကောင်းမွန်ကြသည်။ A-list နှစ်လုံးသည်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးထာဝရရောင်းရန်ရှိသောရုပ်ရှင်အမြောက်အမြားအတွက်အားဖြည့်သည်။ အဆိုပါမိတ်ဖက် 1998 ရင်ခုန်စရာဟာသနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် မင်္ဂလာဆောင်အဆိုတော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာအခြားရင်ခုန်စရာဟာသတစ်ခုနဲ့ဆက်သွားခဲ့တယ်။ Blend ။ သို့သော်သူတို့၏အချစ်ဆုံးရုပ်ရှင်သည် Sandler-Barrymore trilogy ပာ၏အလယ်တန်းကလေးဖြစ်သည်။ 50 ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲများ ။
Adam Sandler ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်ကိုစတင်သည်။ Sandler သည်ယခုအချိန်တွင်အဏ္ဏဝါတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသမှုခံယူသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်သူမနှစ်သက်ရာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအဆုံးသတ်မည့်ကတိက ၀ တ်ကိုကြောက်ရွံ့သည့်အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ရေကြောင်းကုသရေးသမားဖြစ်သည်။ ဒီအမျိုးသမီးဟာ Lucy Whitmore (Drew Barrymore) ဖြစ်ပြီးကားမတော်တဆမှုကြောင့်ခဏတာမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုခံရသူ။ ဒါပေမယ့်ဟင်နရီဟာသူမနိုးပြီးသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမှတ်သားနိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း Lucy ကိုချစ်မြတ်နိုးလာစေဖို့သူဟာတစ်နေ့တည်းမှာထွက်ပြေးရင်းမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုသူတို့ရဲ့လျှံလောင်ကျွမ်းစေဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။
50 ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲများ မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးနောက်အလွန်ဘဝကိုပြန်ပြောင်း။ မရသောတစ်စုံတစ် ဦး အားနေ့တိုင်းဆွေမျိုးလူစိမ်းနှင့်ချစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာလိုက်တယ်။ သို့သော် Sandler နှင့် Barrymore တို့သည်ဟာဝိုင်ယီ၏အလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်းတွင်သူတို့၏မျက်နှာပြင်ကြီးပြသထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များအတွက်ဒေသအသစ်သို့ခရီးသွားခြင်းထုံးတမ်းစဉ်လာကိုနှလုံးသားနှင့်ဟာသဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြသည်။ ဟေ့၊ မင်းပရိသတ်တွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မင်းပျော်စရာကောင်းမှာလား။ ရယ်မောခြင်းများနှင့်မေ့လျော့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုသက်သာစေပါ 50 ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲများ Hulu အပေါ်။
နောက်တစ်ခု:၂၅။ Adaline ခေတ်
နယူးယောက်၊ 22ပြီ ၂၂ - Blake Lively သည် Apple Store သို့တက်ရောက်သည်။ Soho မှTheပြီလ ၂၂ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့တွင်Storeပြီလ ၂၂ ရက်၊ Apple Store Soho တွင် 'Soho တင်ပြသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Blake Lively၊ ' Adaline ၏ခေတ် ' (ဂျေမီဆက်မက်ကာသီ / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂၅ ။ Adaline ၏ခေတ်
ဒါရိုက်တာ Lee Toland Krieger
သရုပ်ဆောင် - Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstyn, Kathy Baker, Amanda Crew, Lynda Boyd, Anjali Jay, Richard Harmon
ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, Adaline ၏ခေတ် ကြံစည်မှုရေးသားသူရဲ့ဝိသေသသဘောကျကြည်နူးဖွယ်ယဉ်ဆန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များနဲ့တူကိုဖတ်စေခြင်းငှါသော်လည်း, တစ် ဦး က Nicholas Sparks ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံပြီးရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ယင်းအစား၎င်းသည်ဟောလိဝုဒ်၏အကြီးမားဆုံးကြယ်တစ်လုံးတွင်သရုပ်ဆောင်ထားသောမူလပုံပြင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ CW ရဲ့ hit ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာအတွက်သူမ၏အခန်းကဏ္forကိုများအတွက်လူသိများ အတင်းပြောတဲ့မိန်းကလေး, Blake Live သည်စီးရီးရိုက်ကူးပြီးနောက်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူမဟာအဓိကရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့်ထင်ရှားကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
Adaline ၏ခေတ် အဆုံးစွန်မေးခွန်းကိုအဓိကထားပါ။ Adaline Bowman သည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင်သူမ၏ကားကိုပျက်ကျပြီးလျှပ်စီးသဖြင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်သူမသည်လွန်ခဲ့သော ၂၉ နှစ်ကအသက်မပြည့်သေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းသူမ၏သမီးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီးအာရုံစိုက်မှုသိပ်မရရန်အတွက်အသက်ရှည်စွာနေထိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သူမသည်သူမ၏ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏သားကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်အခါအခြေအနေများပြောင်းလဲသွားသည်။ သငျသညျအသက်အရွယ်မကျင့်သောအခါအမှုအရာ၏ဤမျိုးဖြစ်ပျက်ပုံရသည်။
Blake Live ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမင်းသမီးအဖြစ်သံသယဝင်မိရင် Serena van der Woodsen ဟာရာသီဥတုခြောက်လကြာမြင့်တဲ့အတွက်သူမရဲ့အခန်းကဏ္roleကနေပါဝင်လာနိုင်ခြင်း၊ Adaline ၏ခေတ် မင်းကိုမင်းအသစ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သူမနှင့်လုံးဝမတူသူတစ် ဦး ကိုသူမကစားခွင့်ပေးခဲ့သည်။ Lively သည်ရှုပ်ထွေးသည့်ရှုပ်ထွေးသည့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တွင်ထင်ရှားသည်။ နှင့် Harrison Ford ကဲ့သို့သောဒဏ္suchာရီထိုကဲ့သို့သောအရေးပါသောအခန်းကဏ္ playing နှင့်အတူကမဖြစ်မနေစီးဆင်း!
နောက်တစ်ခု:24. Zoolander 2
New York, NY - ဖေဖော်ဝါရီ 09: (L-R) သရုပ်ဆောင်များဘင် Stiller, Will Ferrell, Penelope Cruz နှင့် Owen Wilson တို့သည်နယူးယောက်စီးတီးရှိ Alice Tully Hall ၌ 'Zoolander နံပါတ် ၂' ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တွင်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုလမ်းလျှောက်သည်။ (Paramount အတွက် Brian Ach / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂၄ ။ Zoolander 2
ဒါရိုက်တာ Ben Stiller
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် - Ben Stiller၊ Owen Wilson၊ Will Ferrel၊ Penelope Cruz၊ Kristen Wiig၊ Fred Armisen, Kyle Mooney, Milla Jovovich, Christine Taylor, Justin Theroux, Nathan Lee Graham, Cyrus Arnold၊
ဤတွင်အမှန်တရားပါပဲ: တစ်ခါတစ်ရံဆက်ဆက်ရုံမူရင်းကတည်းက 10 နှစ်ကျော်ခဲ့အထူးသဖြင့်လျှင်, မလိုအပ်ပါဘူး။ သေချာတာပေါ့, Zoolander အစောပိုင်း aughts ကနေ quintessentially adored နှင့်ကိုးကားအများဆုံးရုပ်ရှင်ကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အခြားတ ဦး တည်းလိုအပ်ခဲ့တာလဲ ဤအရာကိုဤအသုံးအနှုန်းများဖြင့်စဉ်းစားပါ - Lindsay Lohan နှင့်ပလတ်စတစ်များကိုအမေသို့မဟုတ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအမျိုးသမီးအဖြစ်အငယ်တန်းမိန်းကလေးများနောက်ဆက်တွဲသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းမည်လော။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အို, 2016 ကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏ Zoolander2။
သူလုပ်နေတာအတွက်အခြားအရှုပ်တော်ပုံသို့တက်မျောရဲ့အဖြစ်ဘင် Stiller မော်ဒယ် Derek Zoolander အဖြစ်ဒါရိုက်တာနှင့်ကြယ်အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ သူနှင့် Hansel McDonald (Owen Wilson) တို့သည်သီးခြားနေခဲ့ကြသော်လည်းရောမတွင်ကျင်းပသောဖက်ရှင်ပွဲတွင်သူတို့နောက်ဆုံးမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ချိန် မှစ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲသွားသည့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုသို့ထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် Valentina Valencia (Penelope Cruz) သည် Zoolander နှင့် Hansel တို့၏ပေါ့ပ်ကြယ်များကိုသတ်ရန်တာဝန်ရှိသူကိုရှာဖွေရာတွင်အကူအညီလိုအပ်သည်။
Zoolander2ကဲ့သို့တူညီသောစွမ်းအင်နှင့်အတူရောက်လာခဲ့ပါဘူး Anchorman2သုံးနှစ်အစောပိုင်းက။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ပရိတ်သတ်တွေကနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အလုံအလောက်ရှိဟန်ရှိတဲ့ဟာသရုပ်ရှင်ကိုမှတ်မိကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Zoolander2တစ်သံနှင့်အတူလဲကျပေမယ့်သူကဟာသထူးချွန်၏တောက်ပသွန်းရှိခြင်း၏ဆုကြေးငွေရှိပါတယ်။ Hulu ပေါ်တွင်စီးဆင်းရန်နောက်ဆုံးပေါ်ရယ်မောခြင်းများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်အစဉ်အမြဲ silliest နောက်ဆက်တွဲလက်လွတ်ချင်ကြဘူး။ ဟေ့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမူရင်းတူသောအစွန်းရောက်အာရုံသို့ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခု:23. Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်
ကိန်း၊ ပြင်သစ် - မေ ၁၈ ရက် - (၆၁) ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်း၌ Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်နှင့် The Kingdom of The Crystal ဦး ခေါင်းခွံတွင်ဒါရိုက်တာ / ထုတ်လုပ်သူဂျော့ခ်ျလူးကပ်စ၊ သရုပ်ဆောင် Harrison Ford နှင့်ဒါရိုက်တာစတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ်တွင်ပြသသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မေလ ၁၈ ရက်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ကိန်းမြို့၌နေထိုင်သည်။ (Gareth Cattermole / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂ ။ အင်ဒီယားနားဂျုံးစ် သုံးဆူ
ဖြန့်ချိနှစ် - 1981, 1984, 1989
သရုပ်ဆောင် - Harrison Ford, Denholm Elliott, John Rhys-Davies, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Sean Connery, Alison Doody, Julian Glover
စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ်နှင့်ဂျော့ခ်ျလူးကပ်စ်တို့နှင့်အတူအချိန်ကုန်ဆုံးသောအထင်ကရရုပ်ရှင်များကိုဆွေးနွေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲဒီမှာရုပ်ရှင်တွေသီးခြားစီအတူတူအတူတကွမျိုးဆက်များစွာသတ်မှတ်နှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှင့်အတူပရိသတ်တွေ (နှင့်သက်တမ်း) အသစ်များကိုရှာဖွေဆက်လက်။ Jaws နဲ့ Stars ကြားမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာရွှေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့်အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအချိန်တိုင်းရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးစွန့်စားခန်းရုပ်ရှင်အချို့ကိုပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။
ပျောက်သောသေတ္တာ၏ Raiders ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကျော်ကြားသောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်သည်ပterိညာဉ် (၁၀) ခုအတွက်ပsearchingိညာဉ်သေတ္တာအားရှာဖွေ။ ဟီတာ၏အေးဂျင့်များအားဆန့်ကျင်။ ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ In အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့် Doom of Doom , Indiana ပြည်နယ်ရဲ့စွန့်စားမှုပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်မတိုင်မီဖြစ်ပျက်နှင့်သူ့ကိုအဖိုးတန်ကျောက်မျက်နှင့်ပြန်ပေးဆွဲကလေးတွေချွေတာတွေ့။ In အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့်နောက်ဆုံးခရူးဆိတ် အင်းဒီသည်သူ၏ဖခင်အားနာဇီများသိမ်းယူခဲ့သောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အားရှာဖွေသည်။
ရှင်းနေသည်မှာအင်ဒီယာနာဂျုံးစ်သည်တစ်ဝက်လောက်သို့မဟုတ်လောင်းကြေးအနည်းငယ်မျှမလုပ်ခဲ့ပါ။ သူဟာအမြဲတမ်းအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအမြဲတမ်းစွန့်စားခန်းတစ်ခုပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသောကြောင့်၎င်း၏အဓိကသီချင်းသီချင်းသည်မှတ်မိဆဲဖြစ်ရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်ပန်းခြံ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအင်ဒီယာနာဂျုံးစ်အားမီးပြန်လည်လောင်စေခဲ့သည်။ စီးရီးမှအခြားအရစ်ကျနောက်ဆုံးပေါ်မစ်ရှင်မဖွင့်မီ, Hulu အပေါ်မူရင်း trilogy ပာဖမ်းပါ!
၂၂ ။ သူမသည်အားလုံးပါပဲ
ဒါရိုက်တာ Robert Iscove
သရုပ်ဆောင် - Freddie Prinze ဂျူနီယာ၊ Rachael Leigh Cook၊ ပေါလ် Walker၊ မMatthewဲ Lillard၊ ဂျိုဒီလင်းအိုကီဖ်၊ Usher Raymond၊ Kimberly Lil 'Kim Jones၊ အန်နာပါကွင်၊ Kieran Culkin၊ Elden Henson၊ Gabrielle Union၊ Clea DuVall, Tim Matheson
ဒါဟာအငြင်းအခုန်တက်သည်မဟုတ်ပါဘူး။ သူမသည်အားလုံးပါပဲ အားလုံးအချိန်ကုန်ဆုံးသောအကောင်းဆုံးဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ကား ၃ ကားတွင်ပါဝင်သည်။ အမှန်တကယ်နှင့်အမှန်တကယ်ပင် '၉၀ နှင့်အစောပိုင်း' ဆယ်ကျော်သက် rom-coms များနှင့်ပတ်သက်လျှင် Freddie Prinze Jr. ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသင်မမှားနိုင်ပါ။ အမျိုးအစားပေမယ့် သူမသည်အားလုံးပါပဲ အကြောင်းရင်းများစွာအတွက်ကိတ်မုန့်ကိုယူသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းအသက်ရှင်သေးသောမည်သူမဆို ၁၉၉၉ သည်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိလိုလျှင်၊ သူတို့လုပ်သင့်သည်မှာဤရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
၏ပုံပြင်များအပေါ်အခြေခံသည် Pygmalion နှင့် အဆင်းလှသောမိန်းမ၊ ထိုရုပ်ရှင်သည် Zach Siler (Freddie Prinze Jr. ) ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသူ၏လူမှုရေးအဆင့်အတန်းနှင့်လိုက်ဖက်သောအတ္တတစ်ခုဖြစ်သည်။ တံခါးပိတ်နောက်ကွယ်မှသူသည်စိတ်ထိခိုက်လွယ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သည် (သို့သော်) အထက်တန်းကျောင်းများ၌သူသည်သူမမည်သည့်မိန်းကလေးကိုမှပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပြီးသူမ၏ကျောင်းကမိဖုရားဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူ Laney Boggs (Rachael Leigh Cook) ကိုဖန်သားဖြင့် ၀ တ်ထားသည့်နံရံကပ်အလှဆင်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။ နှစ်ခုသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စတင်ကျပြီးအမှန်တရားထွက်ပေါ်လာသည့်အထိသူ၏အစီအစဉ်သည်ခဏကြာသည်။
သူမသည်အားလုံးပါပဲ Box Office ၏မျှော်မှန်းချက်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ၁၀ ဆကျော်သောဘတ်ဂျက်ကိုလုပ်ခဲ့သည် - သင်စဉ်းစားမိလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၏ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ပရိသတ်အသစ်များရရှိရန်ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် reboot ကုသမှုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်စကားများသောခဲ့ပေမယ့်ဒီမှာဟောလိဝုဒ်တစ်ခုပွင့်လင်းနှင့်ပြင်းထန်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်: '90s ဂန္ထဝင်တစ် ဦး တည်းချန်ထားပါ! ဒါဟာ corny ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခေတ်မမီတော့စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကချစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ Hulu ပေါ်ရှိဒိန်ခဲနှင့်လွမ်းဆွတ်မှုကိုလက်ခံပါ။
နောက်တစ်ခု:21. Iron Man
New York - April 28: ဒါရိုက်တာ Jon Favreau နှင့်သရုပ်ဆောင်ရောဘတ် Downey ဂျူနီယာ 2008 ခုနှစ်Manပြီလ 28 ရက်နေ့နယူးယောက်မြို့ The Odeon တွင် The Cinema Society နှင့် Michael Kors ကစီစဉ်သော 'Iron Man' အတွက်ကျင်းပသည့်ပါတီပွဲသို့တက်ရောက်သည်။ (Stephen Lovekin / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2008
ဒါရိုက်တာ Jon Favreau
သရုပ်ဆောင်: ရောဘတ် Downey ဂျူနီယာ, Terrence Howard, Jeff Bridges, Shaun Toub, Gwyneth Paltrow ။ ဖာရာ Tahir, Paul Bettany, Leslie Bibb, Clark Gregg
ကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့သောရုပ်ရှင်။ ဘယ်သူလွှတ်လိမ့်မည်ဟု 2008 ခုနှစ်တွင်ပြန်ထင်ကြလိမ့်မယ် သံမဏိလူသား လာမယ့်ဆယ်စုနှစ် - ငါတို့ဖျော်ဖြေရေး၏ Marvel အားဖြင့်စားသုံးလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပေါ်လာမလဲ နောက် ၁၀ နှစ်အကြာတွင်သာမကအဖွင့်အဖွင့် Marvel Cinematic Universe ၏ ၀ င်ရောက်မှုကိုနောက်ထပ် ၁၇ ခုထက်မနည်းသောရုပ်ရှင်ကားများဖြင့်လည်းလိုက်လံပြသနိုင်ခဲ့သည်။ Iron Man သည် Avengers နှင့် Spider-man ကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သို့သော်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
အဘယ်သူသည် Lauren ဂျာမန်ချိန်းတွေ့သည်
သံမဏိလူသား ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်တီထွင်သူနှင့်စီးပွားရေးသမားတိုနီ Stark အဖြစ်စတင်ခဲ့သူ titular စူပါဟီးရိုးအဖြစ် Robert Downey Jr. နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ရှိစဉ် Stark ကိုအကြမ်းဖက်သမားများကပြန်ပေးဆွဲသည်၊ ၎င်းကနယ်နမိတ်မှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းရှာရန်သူ့ကိုတွန်းအားပေးသည်။ သူသည်သံချပ်ကာဝတ်စုံကိုတီထွင်။ ၎င်းကိုမပျက်စီးနိုင်သော (အများအားဖြင့်) Iron Man အဖြစ်သူ၏အားသာချက်နှင့်သူ့နေရင်းနိုင်ငံ၏အကျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အစပြုခဲ့သောအရာသည်ချစ်ကြည်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
နောက်ဆက်တွဲနှစ်ခုဆက်တိုက် သံမဏိလူသား, နှင့် Robert Downey Jr. သည်သူ၏ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်အဖြစ် Marvel ရုပ်ရှင်များတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ စတုတ္ထ Iron Man ရုပ်ရှင်အတွက်မဆိုအစီအစဉ်များရှိပါတယ်မဟုတ်နေစဉ်, ဘယ်တော့မှပြောပါဘယ်တော့မှမ။ တိုနီ Stark ရဲ့ Marvel ရုပ်ရှင်ရုံinာအတွင်းမှာအချိန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌မဆိုအချိန်ကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသော်လည်းအဖြစ် itdoes မထင်ထားဘူး သငျသညျ MCU ၏အကျယ်အားဖြင့်အနည်းငယ်လွှမ်းမိုးနေလျှင်, Hulu သင်က၎င်း၏နှိမ့်ချစတင်အပေါ်လန်းဆန်းခဲ့သည်။
၂ ဝဝ ၂ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်တနင်္လာနေ့တွင် Beverly Hills ဟိုတယ်၌ကျင်းပသောဟောလိဝုဒ်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရုပ်ရှင်ကျောင်းများအတွက်အကျိုးရှိရန်အတွက် Hollywood နိုင်ငံခြားသတင်းစာအသင်းမှနေ့လည်စာမှကင်မရွန်ဒိုင်ဇ် (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ) ။
ဒါရိုက်တာ - Roger Kumble
သရုပ်ဆောင် - Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair၊ သောမတ်စ်ဂျိန်း၊ Jason Bateman, Parker Posey, Eddie McClintock
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်နိမ့်သောရုပ်ရှင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနှုန်းနိမ့်ကျသောရုပ်ရှင်များနှင့်မရိုးရှင်းသည့်ရုပ်ရှင်ကားများဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ အချိုဆုံးအရာ ဒါဟာအတိအကျနဲ့တူကင်မရွန် Diaz ရဲ့ hits အဆင့်တွင်မဟုတ်ခဲ့ 2002 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် မာရိအကြောင်းတစ်ခုခုရှိပါတယ် ဒါမှမဟုတ် ချာလီရဲ့ကောင်းကင်တမန်များ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းလျှော့တွက်ထားခြင်းခံရပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းလူကြိုက်များသောအမှတ်အသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမခံခဲ့ရသော်လည်း ၂၀၀၂ မှအချိန်နှင့်အကွာအဝေးသည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုခဲ့သည်။
အချိုဆုံးအရာ ယခုအချိန်တွင် Cameron Diaz အမည်ရှိ Christina Walters ဇာတ်ကား၏သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသား Vince Vaughn နှင့် Adam Sandler တို့၏ဇာတ်ကောင်များကိုဇာတ်ညွှန်းများဖြင့်လှန်ပေးသည်။ နံပါတ်အတုနံပါတ်များကိုထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ကုန်းပေါ်၌ယောက်ျားများကိုမြဲမြံစွာကစားခြင်းသည်ခရစ္စတီနာ၏ကစားသမားဖြစ်သည်။ သူမပတေရု (သောမတ်စ်ဂျိန်း) နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါ, သူမသူမ၏ ဦး ခေါင်းထဲကသူ့ကိုမရနိုင်မှာပါ။ သူမနှင့်သူမ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Courtney (Christina Applegate) သည်သူမနှင့်ဆက်သွယ်မှုမပြုမီပေတရုကိုခြေရာခံရန်လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင် 2002 ခုနှစ်၏ Ebert & Roeper ရဲ့အဆိုးဆုံးစာရင်းအပေါ်ဆင်းသက်ပေမယ့်, ထိုသတ်မှတ်ချက်နောက်ကြောင်းပြန်အတွက်မဟုတ်ဘဲကြမ်းတမ်းခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ အချိုဆုံးအရာ ကျနော်တို့လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ဖို့အသုံးပြုကြပြီဟာသထက်အများကြီးလျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်တ ဦး တည်းသို့လှိမ့်ဟာသတစ်ခုသုံးခု: တစ် ဦး ကရင်ခုန်စရာဟာသ, တစ်လမ်းခရီးစဉ်ဟာသနှင့်လိင်ဟာသ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဘာလဲ? နေမင်း ရက်စက်သောရည်ရွယ်ချက်များ ဒါရိုက်တာ Roger Kumble နှင့်ရေးသားခဲ့သည် အရှက်မရှိ စာရေး Nancy Pimental, အချိုဆုံးအရာ သငျသညျ Hulu အပေါ်ရှာဖွေနေခဲ့တာမေ့လျော့ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။
Austin, TX - မတ် ၁၂ ရက် - ဒါရိုက်တာ Richard Linklater နှင့်သရုပ်ဆောင်များ Austin Amelio၊ Wyatt Russell၊ ဖောရက်စ် Vickery၊ Zoey Deutch၊ Glen Powell၊ ဂျေ Quinton ဂျွန်ဆင်, Tanner Kalina၊ Temple Baker၊ Will Brittain၊ Tyler Hoechlin, Juston Street နှင့် Blake Jenner တို့တက်ရောက်ကြသည် ၂၀၁၆ SXSW တေးဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောပွဲတော်၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်တွင် Radisson ဟိုတယ်၊ (SXSW အတွက် Neilson Barnard / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၉ ။ လူတိုင်းကတချို့လိုချင်တယ် !!
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: ရစ်ချတ် Linklater
Blake Jenner၊ Zoey Deutch၊ Glen Powell၊ Tyler Hoechlin၊ Ryan Guzman၊ Wyatt Russell, Temple Baker၊ ဂျေ Quinton ဂျွန်ဆင်၊ Will Brittain၊ Juston လမ်း၊ ဖောရက်စ်ဗစ်ကာ၊ Madison Burge
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများအားလုံးသည်အရည်အသွေးရှိသောအလုပ်တစ်ခု၏ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့ကြပြီးရစ်ချတ်လင်ကလီတာ၏ရုပ်ရှင်ကားသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းနိုင်သည်။ သူနှင့်အတူလက်ငင်းဂန္နှိမ့်ချစတင်ရရှိပါသည် စိတ်ရှုပ်ထွေး အကယ်၍ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခံရသည်နှင့်အတူကြီးမားသောသေနတ် ကလေးဘဝ, အဆိုပါ Ind အစွန်းရောက်အကြိုက်ဆုံး မပြုမီ trilogy ပာနှင့်ဂျက်က Black ရဲ့နှင့်အတူအဓိကစတူဒီယိုဟာသ ရော့ခ်ကျောင်း ။ သို့သော်သူ၏နောက်ဆုံးထုတ်ရုပ်ရှင်အတွက် Linklater သည်သူ၏ဘဝကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖန်တီးရန်သူ၏မူလအစသို့ပြန်သွားခဲ့သည် လူတိုင်းကတချို့လိုချင်တယ် !!
ယခင်ရုပ်ရှင်မှဝိညာဉ်ရေးရာနောက်ဆက်တွဲစဉ်းစား အံ့သြသွားပြီးရှုပ်ထွေး နှင့် ကလေးဘဝ, 1980-set ကို လူတိုင်းကတချို့လိုချင်တယ် !! အရှေ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိကောလိပ်ဘေ့စ်ဘောအသင်း၏အမြတ်ထုတ်မှုများကိုလိုက်နာသည်။ Jake (Blake Jenner) သည်ကောလိပ်တက်ပြီးသူ၏ဘေ့စ်ဘောကစားသမား Billy (Will Brittain), Roper (Ryan Guzman), Finnegan (Glen Powell), Dale (Quinton Johnson) နှင့် Plummer (Temple Baker) တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Linklater ၏ဇာတ်လမ်းပြောခြင်းစတိုင်၏ဇာတ်လမ်းအရရုပ်ရှင်သည်အမေရိကန်ကောလိပ်အတွေ့အကြုံ၏လွတ်လပ်သောပါတီပွဲသို့နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်သည်။
လူတိုင်းကတချို့လိုချင်တယ် !!, ကန့်သတ်ချုပ်နှောင်ထားသည့်ရုပ်ရှင်အဖြစ်, box Office ရဲမှာဤမျှကောင်းသောခမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လွမ်းဆွတ်မှုမှ၎င်း၏ကတိကဝတ်ခြီးမှမျးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အဖြစ်ရုပ်ရှင်အများကြီးပိုကောင်းအခြေအနေကော ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရစ်ချတ် Linklater ကသူ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ သူဟာခဏတစ်ခု၊ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ အတိတ်ကအမှတ်တရတွေကိုဖမ်းယူပြီး၎င်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာကိုဖန်တီးပေးသည်။ ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာလှပတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့စိတ်ကူးနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးတေးသံသရုပ်ဆောင်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ မင်းရုပ်ရှင်မင်းအတွက်ညဥ့်အခါအချို့လိုချင်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။
တိုရွန်တို၊ ON - စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုမြို့၌ 2017 ခုနှစ် TIFF Bell Lightbox တွင်ကျင်းပသော 2017 Toronto International Film Festival တွင်မင်းသမီး Frances McDormand သည် 'Ebbing အပြင်ဘက်ရှိ Miss Billboard သုံးခု' တွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌စင်မြင့်ပေါ်တွင်တင်ဆက်သည်။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၈ ။ Fargo
ဒါရိုက်တာ Joel Coen
သရုပ်ဆောင် - Frances McDormand၊ William H. Macy၊ Steve Buscemi၊ Harve Presnell, Peter Stormare, Kristin Rudrud, Tony Denman, Steve Reevis, Warren Keith, Larry Brandenburg, John Carroll Lynch, Steve Park
သေချာတာပေါ့, ငါတို့ရှိသမျှသည်အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါတယ် Fargo, သူမ Emmy Awards ၏တန်ချိန်များစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် FX မနုologyဗေဒစီးရီး, ဒါပေမယ့်သူက reboot လုပ်ခဲ့သည့်မှမူလရုပ်ရှင်အမြဲအထွreme်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံလိမ့်မယ်။ FX မနု reb ဗေဒပြန်ဖွင့်ခြင်း၏ပထမဆုံးရာသီ ၃ ခုကို Hulu တွင်သင်တွေ့နိုင်သည် (သင်လုပ်သင့်သည်), စီးရီး၏အရက်ဆိုင်ကို အကယ်၍ အကယ်ဒမီဆုရှင်ဆုရှင်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျပြီးသားသင်တစ် ဦး စာသင်ယူကြောင်း undergradive ရွေးကောက်ခြင်း၌ကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်လျှင်ဖြစ်ပါသည်။
Fargo မင်နီဆိုတာရှိလမ်းဘေးလူသတ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲအရာရှိ Marge Gunderson အဖြစ် Frances McDormand အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ အဖြစ်အပျက်များအရဂျယ်ရီလန်းဒီဂတ် (William H. Macy) အမည်ရှိကားရောင်းသူသည်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်အကြွေးပြန်ဆပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ဇနီးကိုယူဖို့ရာဇ ၀ တ်သားတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းပြီးသူ့ဖခင်ဆီကရွေးနုတ်ဖိုးယူနိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လူများသေဆုံးသောအခါအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်သွားသည်။
ဒါဟာပြောနေစရာမလိုဘဲသွားပေမယ့် Fargo ပရိသတ်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမျက်မြင်သက်သေခုနစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အိမ် (၂) လုံးကိုရရှိခဲ့သည် (Frances McDormand အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးနှင့် Coen Brothers အတွက်အကောင်းဆုံးမူရင်းဇာတ်ညွှန်း) ။ သငျသညျမြင့်မားတဲ့လောင်းကြေးရာဇဝတ်မှု, ၏အနက်ရောင်ဟာသနှင့်အတူရယ်မောသောရုပ်ရှင်များအတွက်စျေးကွက်အတွက်ရောက်နေလျှင် Fargo ညာဘက်သင့်ရဲ့လမ်းကြားတက်သည်။ နှင့်များစွာသောရုပ်ရှင်တွေနဲ့မတူဘဲ, binged နှင့်စွဲလမ်းခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးရုပ်မြင်သံကြား rework ၏ဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေလည်းရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခု:17. ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်
LOS ANGELES, CA - မတ် ၂၅: မင်းသား Stephen Amell (L) နှင့် Megan Fox တို့သည်လာမည့် Paramount Pictures ရုပ်ပုံများကိုထုတ်လွှတ်ရန် WonderCon 2016 တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ထိုးပွဲသို့တက်ရောက်သည်။ 'ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles' ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၂၅ ရက်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရှိ LA Convention Center တွင် The Shadows မှထွက်သည်။ (Frazer Harrison / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၇ ။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်: အရိပ်ထဲက
အားဖြင့်ဒါရိုက်တာ: Dave အစိမ်းရောင်
သရုပ်ဆောင် - Megan Fox၊ Will Arnett၊ Laura Linney၊ စတီဖင်အမဲလ်၊ Noel Fisher၊ Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Tyler Perry, Tony Shalhoub, Gary Anthony Williams, Sheamus, Brad Garrett
ရှင်းနေသည်မှာ Hulu ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်အတူသွားနေသောဆောင်ပုဒ်တစ်ခုမှာလွမ်းဆွတ်မှု၏အမှိုက်ပုံအပေါ်သို့အမှိုက်ပုံရှိပါတယ်။ ထိုအ '' 80s ကလေး, ဒီတစ်ခုသင်တို့အဘို့ပါပဲ။ The Teenage Mutant Ninja Turtles ကိုမုန်းတီးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဘယ်သောအခါမျှပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ်သော်လည်း ၂၀၁၄ reboot ရုပ်ရှင်သည်ကလေးသူငယ်မျိုးဆက်သစ်များသို့ရာဇ ၀ တ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွားသွားသတ္တဝါများအဖြစ်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ Self- အမည်ရပထမ ဦး ဆုံး reboot ရုပ်ရှင်, 2016 ရဲ့ကနေချွတ်ခုန် ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်: အရိပ်ထဲက အဆိုပါ Adventures ကိုဆက်လက်။
In မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက Shredder (Brian Tee) သည် Baxter Stockman (Tyler Perry) နှင့်မကောင်းသောသိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှုနှင့်ရလဒ်အနေဖြင့်ကြောက်စရာကောင်းသောလေးယောက် (Pete Ploszek၊ Alan Ritchson, Noel Fisher, Jeremy Howard) သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သို့သော်လိပ်လိပ်များသည်ထောင့်နေရာတွင်aပြီလအိုနေးလ် (Megan Fox)၊ Vernon Fenwick (Will Arnett) နှင့်ကာဇီဂျုံးစ် (Stephen Amell) တို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် Krang (Brad Garrett) သည်သူတို့၏လွင့်မျောနေသောအချိန်ဇယား၌လိမ်ဖဲ့ခြင်းပြုလုပ်ရန်ပြန်လာသည်။
အသစ်ကကျောင်းနှစ် ဦး စလုံး ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ် ရုပ်ရှင်ကားများသည်လတ်တလောတွင်လတ်ဆတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းများပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းယူလာမျက်လုံးတွေရှိပါတယ်အဖြစ်ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်၌, အရာအားလုံးသည်နောက်တဖန်အသစ်အသစ်များဖြစ်ကြသည်။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက ၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်အရေးပါသောမျက်နှာစာတစ်ခုခုကိုအပေါ်နီးပါးအဖြစ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ဤရုပ်ရှင်သည်၎င်း၏အားသာချက်များမပါဘဲ, တ ဦး တည်းဂိမ်းရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုခံရဖို့ခံရဖို့အလွန်ပျော်စရာဖြစ်ခြင်း, အထူးသဖြင့်နေဆဲသူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်သို့ကောင်းစွာလိပ်ကုန်သွယ်အဖျားခတ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။
နောက်တစ်ခု:၁၆။ ကာလတို ၁၂
၁၆ ။ ကာလတို 12
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၁၃
ဒါရိုက်တာ Destin Daniel Cretton
သရုပ်ဆောင် - Brie Larson ဂျွန်ဂယ်လာဂါဂျူနီယာ၊ Kaitlyn Dever, Rami Malek, Lakeith Stanfield, Kevin Hernandez, Melora Walters, Stephanie Beatriz, Lydia Du Veaux, Alex Calloway, Frantz Turner, Diana Maria-Riva
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်က၊ အကယ်၍ မင်းက Brie Larson ဟူသောအမည်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားပြောခဲ့လျှင်၊ မင်းကဘယ်သူတွေပြောနေမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့သူမ၏အတွက်မြင်ဘူး ၂၁ ခုန်လမ်း သို့မဟုတ်သူတို့သည်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ခဲ့လျှင်သူမအားဖမ်းဆီးလိုက်သည် ကမ္ဘာ့ဖလား vs. Scott Pilgrim ။ ဒါပေမယ့်ထုသေးဟောလိဝုဒ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်လက်နက်အပေါ်အတွက်မသွားပါစေခဲ့သည်။ Larson 2015 ရဲ့အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအဘို့အော်စကာအနိုင်ရသည်အထိဒါဟာမဟုတ်ခဲ့ပေ အခန်း သူမအနေနဲ့ဝယ်လိုအားမင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ကာလတို 12 နှစ်နှစ်အစောပိုင်းကပဲဖိတ်။
Larson သည် Indie ဒရာမာကိုဂရက်စ်ဟတ်ဝ့်ဒ်ကိုစွန့်စားပြီးလူငယ်အုပ်စုအိမ်၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်တင်ဆက်သည်။ နေ့အားဖြင့်ဂရေ့စ်သည်သူမ၏ဆယ်ကျော်သက်နေထိုင်သူများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်သာယာဝပြောမှုများကိုလေ့ကျင့်နိုင်သော်လည်းညအချိန်တွင်သူမသည်မိမိကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်သာယာဝပြောမှုများကိုပျောက်ဆုံးစေသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုဆယ်ကျော်သက်သူမ၏အိမ်သစ်မှ acclimate ကူညီခြင်းနှင့်အခြားဆယ်ကျော်သက်များ၏ကြိုးစားခဲ့သတ်သေရင်ဆိုင်နေရစဉ်, ဂရေ့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအပြီးတွင်သူမအရာအားလုံးကိုမေးခွန်းထုတ်ထွက်ခွာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျပ်အတည်းအက်ကြောင်းမှတဆင့်ချော်။
ကာလတို 12 အဆိုပါ Indie ကမ်ဘာပျေါတှငျသိသာထင်ရှားသောလှိုင်းတံပိုးကိုလုပ်။ လေးနက်သောလမ်းအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အရာသီရာသီလက်စွပ်အတွက် Brie Larson ရဲ့ ဦး ထုပ်ပစ်ချ၏။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုများအပြင် Larson သည်လွတ်လပ်သော ၀ ိညာဉ်ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံး ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ for အတွက်တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူမသည်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုပြောရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်ကမ္ဘာကြီးသည်အနာဂတ်တွင်ကပ္ပတိန်အံ့ to ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုထက်မကအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အတွက်အရေးယူအတွက်သူမ၏ကြည့်ရှုပါ ကာလတို 12 Hulu အပေါ်
ဆယ့်ငါး ကူးတို့ Bueller ရဲ့နေ့ပိတ်
သရုပ်ဆောင် - မMatthewဲ Broderick၊ Alan Ruck၊ Mia Sara၊ Jennifer Grey၊ ဂျက်ဖရီဂျုံးစ်၊ Lyman Ward၊ Cindy Pickett, Edie McClurg, Ben Stein, Del Close, Charlie Sheen, Virgina Capers, Richard Edson, Larry Flash Jenkins
မကြာသေးမီကလူကြိုက်များသောတေးသီချင်းများမှအသံထွက်ညွှန်းဆိုချက်များကြောင့်မကြာမီက Vogue ဖြစ်လာသည်။ ‘80 များအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုနှင့်တူပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အဆုံးသတ်ပြီးကတည်းကအအေးဆုံးဆယ်စုနှစ်၏ရိုးရှင်းသောအချိန်များတွင်ပြန်ကြည့်နေသည်။ အထူးသဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင် John Hughes မှရုပ်ရှင်ကားများနှင့်သူတို့၏ဂီတများကိုဖြတ်တောက်ပစ်သည်။ မှ မနက်စာကလပ် ရန် ပန်းရောင်ထဲမှာလှလှပပ Hughes သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏မှော်နှင့်ရူးသွပ်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်သော်လည်းမည်သည့်အခါမျှထိုထက်မက ကူးတို့ Bueller ရဲ့နေ့ပိတ်။
မက်သရူးဘရက်ဒရစ်ခ်ျသည်ဖျားနာမှုကိုကျောင်းမှလွယ်လင့်တကူကစားရန်ဖျားနာသူဖြစ်သည်။ Ferris Bueller သည်သူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Cameron Frye (Alan Ruck) ကိုသူမဘွဲ့မတိုင်မီအထက်တန်းကျောင်း၏ ၉-၅ တန်းဇယားပုံစံကိုမြုပ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်သူ၏ရည်းစား Sloane Peterson (Mia Sara) နှင့်အတူသူနှင့်အတူထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူတို့၏အားလပ်ရက်များတွင် Ferrari ကိုခိုးယူခြင်း၊ Cubs ဂိမ်းကိုသွားခြင်း၊ ချီတက်ပွဲတွင်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်သူတို့၏ကျောင်းအုပ်ကြီးထံမှထွက်ခွာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကူးတို့ Bueller ရဲ့နေ့ပိတ် တိုင်းရိုင်းဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အိပ်မက်၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံဖော်တင်ဆက်ပြည့်စုံလာဖြစ်ပါတယ်။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျ, ကစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနှင့်ဟာသခိုင်ခိုင်လုံလုံအမှန်တရားတစ်နေရာအတွက်ချိုးဖောက်ဟာသနှင့်စတုတ္ထနံရံ။ John Hughes သည်ထိုရုပ်ရှင်ကိုအမေရိကန်တေးဂီတယဉ်ကျေးမှုအဘိဓာန်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုသီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရေးသားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Hulu အပေါ်တစ်နေ့တာကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့!
နောက်တစ်ခု:14. Mockingjay အပိုင်း 2
နယူးယောက်၊ နယူးယောက် - နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်။ (LR) Josh Hutcherson၊ ဂျနီဖာလောရင့်၊ Liam Hemsworth နှင့် Donald Sutherland တို့သည် The Hunger Games: Mockingjay အပိုင်း ၂ 'AMC Loews Lincoln Square 13 ပြဇာတ်ရုံတွင်နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ နယူးယောက်စီးတီး။ (Michael Loccisano / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၄ ။ The Hunger Games: Mockingjay အပိုင်း ၂
အားဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်: Francis ကလောရင့်
အဆိုတော်ဂျနီဖာလောရင့်စ်၊ ဂျူးဟတ်ချာဆင်၊ လီယာဟမ်ဝေါ့သ်၊ Woody Harrelson၊ Banks လိရှဗက်ဘဏ်များ၊ ဂျူလီယန် Moore၊ ဒိုနယ်လ်ဆပ်သာလန်၊ ဖိလိပ္ပု Seymour ဟော့ဖ်မန်း၊ Willow Shields၊ ဆမ်ကလဖလင်၊ နာတာလီဒေါမဲ၊ စတန်လီတာစီ၊
ဘယ်တော့လဲ ဆောင်းရာသီရဲ့အရိုး ၂၀၁၀ မှာထွက်လာတော့ဘယ်သူမှသူမရဲ့နာမည်ကိုမသိခဲ့ကြဘူး။ သို့သော်အချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ဆုံး Hunger Games ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသူသည်အော်စကာဆုရရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ အော်စကာရွှေကိုအိမ်သို့ယူဆောင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မင်းသမီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် X-Men ဂိမ်း, Lawrence ရဲ့သရဖူအောင်မြင်မှု (သင်တန်း၏, ယခုအချိန်အထိ) အရောင်းရဆုံးငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစီးရီး၏မျက်နှာပြင်ကြီးလိုက်လျောညီထွေ toplining ခဲ့သည် The Hunger Games ကြောက်စိတ်နှင့်မြှားထိုးသူပုန် Katniss Everdeen အဖြစ်
နောက်ဆုံးအရစ်ကျ၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက် The Hunger Games: Mockingjay အပိုင်း (၂)၊ သူသည်သမ္မတ Snow (Donald Sutherland) ကိုပုန်ကန်ရန် ဦး ဆောင်နေစဉ်သူမသည် Capitol ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဆေးသည့် Peeta (Josh Hutcherson) နှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူမ၏ Mockingjay ဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားသောစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသောကမ္ဘာတွင်တရားဝင်မျှော်လင့်ချက်အမှတ်အသားဖြစ်သည့် Katniss နှင့် Gale (Liam Hemsworth) အပါအဝင်သူမ၏သူငယ်ချင်းများသည် Snow ကိုလုပ်ကြံရန်အစီအစဉ်များနှင့်ပါလီမန်အဆောက်အအုံထဲသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
The Hunger Games အားဖြင့်ကျန်ရစ်ရုပ်ရှင်ရှုခင်းအတွက်ကွက်လပ်အပေါက်ထဲသို့ချော် အဆိုပါ Twilight Saga ထိုကဲ့သို့သောဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးသောသူရဲကောင်းဝါဒအကြောင်းပြောပြခဲ့သည် dystopian blockbuster မော်ဒယ်သည်ဝိညာဏအစ်မအတွက်လည်းအလုပ်မလုပ်သော်လည်းဖြန့်ချိလိုက်သောအခါစီးရီးသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနိုင် ကွဲလွဲသော။ မည်သည့်နှုန်းထားဖြင့်, Mockingjay အပိုင်း ၂ ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာစီးရီးperfectlyုံအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Katniss အဖြစ်ဂျနီဖာလောရင့်ရဲ့နောက်ဆုံးစီးညာဘက်သင်မှတဆင့်လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုမြှားရိုက်ကူးပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခု:13. Lilo & amp ချုပ်
Daveigh Chase, Lilo ၏စကားသံ၊ ie Lilo အတွက် Premiere နှင့်ပါတီပွဲပြီးနောက်
၁၃ ။ Lilo & ချုပ်
ဒါရိုက်တာ Chris Sanders နှင့် Dean DeBlois တို့ဖြစ်သည်
ရုပ်ရှင်၊ Chris Sanders၊ Daveigh Chase၊ Tia Carrere၊ David Ogden Stiers၊ Kevin McDonald၊ Ving Rhames၊ Kevin Michael Richardson၊ Zoe Caldwell၊ Jason Scott Lee၊ Miranda Paige Walls၊ Amy Hill၊ Susan Hegarty
Pixar ၏အစောပိုင်းကာလများအတွင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးဟိုက်တာများနှင့်စတင်ခဲ့သည် အရုပ်ပုံပြင် နှင့် Monsters Inc. , Disney Animation သည်ခြေရာခံကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။ Disney Princesses ၏နောက်ထပ်လှိုင်းမတိုင်မီကုမ္ပဏီ၏မျက်နှာဖြစ်ရန်အပြာရောင်ဂြိုလ်သားခွေးကိုထားခဲ့ပါ။ Lilo & ချုပ် စကားပြောသောကစားစရာများ၊ ရေခဲမိဖုရားများနှင့်မေ့လျော့နေသောငါးများကြားလူကြိုက်များနေသည့်အချိန်တွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မိသားစု၏ရုပ်ရှင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုက timeless စေသည်။
Lilcent (Daveigh Chase) သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပြီးအထီးကျန်ဖြစ်သောဟာဝိုင်ယီမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးသူမ၏အစ်မကိုအလှည့်တိုင်းပိုက်ဆံပေးသည်။ Lilo တစ် ဦး အညီအမျှနားလည်သဘောပေါက်နားလည်သဘောပေါက်ဂြိုလ်သား, နဂါးငွေ့တန်းရဲ့အများဆုံးဒုက္ခ extraterrestrial ချုပ်နှင့်ထိတွေ့မှီတိုင်အောင်ကံမကောင်းစွာ, သူမ၏အစ်မပင်၏ထက်ဝက်ကိုမတွေ့ရသေး။ သူကသူ့နေအိမ်ဂြိုလ်ပေါ်မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုခဲ့သော်လည်းသူဟာဝိုင်ယီ၏ Lilo ၏အိမ်သို့ပျက်ကျခဲ့နှင့်သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးဖြစ်လာသည်။ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုအတူတကွလှည့်ပြီး Lilo နှင့် Stitch သည် Ohana: Family ဟူသောအရေးကြီးပုံကိုသင်ယူကြသည်။
အိုကေ Lilo & ချုပ် ဒစ္စနေးရဲ့မကြာသေးမီကငွေရှာအဖြစ်နီးပါးအဖြစ်အကြီးအကျယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ အေးခဲနေသော ဒါမှမဟုတ် Moana, ဒါပေမယ့်အပြာရောင်ဂြိုလ်သားသေချာပရိသတ်ကိုအတွက်ထုပ်ပိုးခဲ့တယျ။ ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်သည်ထိုအချိန်ကဒစ္စနေးအတွက်အမြဲတမ်းပေးခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး Animated Feature အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်နဲ့ဇာတ်ကောင်တွေလိုပဲမှတ်မိလောက်တဲ့၊ Lilo & ချုပ် ညာဘက် zeitgeist ၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိ။ သို့တိုင်သင်သည်ခက်ခဲသောလိုင်းအတွက်ဟာဝိုင်အီ Rollercoaster စီးနင်းလိုင်းမသီဆိုနိုင်သည့်အနှစ်တစ်ထောင်ကိုရှာဖွေရန်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။ Hulu အပေါ် ohana ပျော်စရာ၌ပျော်မွေ့!
HOLLYWOOD, CA - 11ပြီ ၁၁: မင်းသား Neve Campbell, Courteney Cox နှင့် David Arquette တို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်Hollywoodပြီလ ၁၁ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Hollywood ရှိ California ရှိ Grauman ၏တရုတ်ပြဇာတ်ရုံတွင်ကျင်းပသော AX Shower မှတင်ဆက်သော The Weinstein ကုမ္ပဏီ၏ 'Scream 4' ၏ Premiere သို့ရောက်ရှိသည်။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၂ ။ အော်
ဒါရိုက်တာ Wes Craven
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် - Neve Campbell၊ David Arquette, Courteney Cox, Skeet Ulrich, Matthew Lillard, Rose McGowan, Jamie Kennedy, Drew Barrymore, Joseph Whipp, W. Earl Brown, Liev Schreiber, Henry Winkler
ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်လူတိုင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်၏ခွက်ကိုမဟုတျပါ, ဒါပေမယ့် အော် လက်ဖက်ရည်ရုံမဆိုခွက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်အများစုသည်သင့်နှလုံးသားကိုခုန်ထိတ်လန့်စရာများနှင့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ပုံရိပ်များဖြင့်တုန်ခါနေစေရန်၊ အော် အမျိုးအစား၏clichéစည်းဝေးကြီးများကိုဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်လျှာ -In-cheek ထိတ်လန့်ပုံပြင်ကိုပြောပြရန်အဆင်သင့်အခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ scarers သိသိသာသာကျဆင်းနေသည့်ခေတ်တွင်၎င်းသည်ဆူညံအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်နှစ်ရှည်လများနှစ်သက်ခဲ့သောအစွန်းရောက်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ပြိုင်ဘက်ကင်းဟာသပြတ်သားမှုနှင့်အတူ slasher ရုပ်ရှင်အနည်းငယ်ကိုယူခဲ့သည်။
အော် Neve Campbell သည်အထက်တန်းကျောင်းသားကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Woodsboro တွင်နေထိုင်သောပုံမှန်မိန်းကလေး Sidney Prescott ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်သူမ Ghostface လူသတ်သမား၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်, သူ၏ဝေါဟာရနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအများဆုံးအထင်ကရထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ထဲကနေဖယ်ရှားပစ်သည့်အမှတ်စဉ် slasher ၏ Ghostface လူသတ်သမား၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။ Ghostface ရဲ့အမျက်ဒေါသနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှမကြာမီတွင် Sidney သည်သူမ၏ပခုံးကိုကြည့်။ သူမရည်းစား Billy (Skeet Ulrich) ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်။ ရက်ရက်စက်စက်သတင်းထောက် Gale Weathers (Courteney Cox) နှင့် dopey လက်ထောက် Dewey Riley (David Arquette) တို့၏အကူအညီဖြင့် Sidney သည်လူသတ်သမားအားအမှတ်တရမှတ်ခဲ့သည်။
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၏လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်မည့်အစား၊ အော် (မူလကခေါင်းစဉ် ကြောက်စရာရုပ်ရှင် ) ကြယ်ပွင့်များအတွက်အမည်မသိသရုပ်ဆောင်များကိုချ။ စွန့်ပစ်။ Drew Barrymore သည်သူ၏ကြယ်စွမ်းအားကိုကာဂျီယိုများသို့ထုတ်ချေးခဲ့သည်။ ငါးပါတီ Neve Campbell သည် ဦး ဆောင်မှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် သူငယ်ချင်းများ ကြယ်ပွင့် Courteney Cox ကသူမရဲ့သေးငယ်တဲ့ screen အောင်မြင်မှုအသစ်ကို screen ကြီးမှာတိုးချဲ့လိုက်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ Wes Craven နှင့် Kevin Williamson တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အနိုင်ရရှိသည့်ပုံသေနည်းတစ်ခုပေါ်သို့ကျရောက်ခဲ့သည် အော် နောက်ဆက်တွဲအဖြေမှာ Ghostface ၏ကျော်ကြားသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကဘာလဲ။
Los Angeles, CA - စက်တင်ဘာ 30: မင်းသမီး Alicia Silverstone, California, Los Angeles မြို့, စက်တင်ဘာလ 30, 2015 တွင်ဟောလိဝုဒ်ပယ်လေဒီယမ်မှာ PETA ရဲ့ 35 နှစ်မြောက်ပါတီတက်ရောက်ခဲ့သည်။ (PETA အတွက် Jason Kempin / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၁၉၉၅
သရုပ်ဆောင် - Alicia Silverstone၊ Stacey Dash၊ Brittany Murphy၊ Paul Rudd၊ Dan Hedaya၊ Elisa Donovan, Justin Walker, Wallace Shawn, Twink Caplan, Julie Brown, Donald Faison, Breckin Meyer, Jeremy Sisto
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောသောအခါ သူမသည်အားလုံးပါပဲ ဒီရုပ်ရှင်ဟာအချိန်ကုန်ဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ကားသုံးကားမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ဟာဒီဟာကထင်ရှားတဲ့ထိပ်တန်းသုံးထိပ်မှာနောက်ထပ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီ။ (စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်မူကျန်ရှိသော slot နှစ်ခုသည်ပိုင်ဆိုင်သည် သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်မုန်းတဲ့အရာတွေ၊ ငါ့ကိုရူးသွပ်စေပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ယူလာခဲ့ပါ ။ သငျသညျဆုံးဖြတ်ပါ။ ) ဒါဟာကြောင်းငြင်းပယ်မရနိုင်ပါ ကလို ရုပ်ရှင်၏တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘာသာစကားကိုအရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်၎င်း၏ခြေရာအတိုင်းလိုက်ကာဟာသနှင့်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်သူမအတွက်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုကိုထွင်းထုထားသည်။ အဲဒီအကြောင်း ifs အဖြစ်ရှိပါတယ်။
ဂျိန်း Austen ရဲ့ဂန္ဝတ္ထု၏တစ် ဦး ကခေတ်သစ် update ကို မင်းသမီး Emma, ​​Clueless Cher Horowitz (သူ Alicia Silverstone) ကိုရွှေနှလုံးသားကြွယ်ဝသောချမ်းသာသော Beverly Hills ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်တည်ရှိသည်။ သူမသည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အခွင့်ထူးတိမ်များပေါ်သို့မျောနေသော်လည်းသူမသည်ကောင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးအခြားသူများကိုကူညီလိုသည်။ သူမရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Dionne (Stacey Dash) နဲ့အတူချာဟာသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ Tai (Brittany Murphy) ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆရာနှစ်ယောက်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းချာသည်သူမ၏မိထွေးဟောင်း Josh (Paul Rudd) နှင့်နီးကပ်လာသည်အထိသူ့အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ချာဟာသူမရဲ့မိထွေးဟောင်းကိုချစ်ခင်တွယ်တာပြီးဘယ်တော့မှထူးဆန်းလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းထူးဆန်းမှုအောက်မှာချစ်စရာအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ကလို ဆယ်စုနှစ်များစွာကျန်ရှိခဲ့သောဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ကားများ၏ထူးခြားသောရှုထောင့်နှင့်ပြုံးရယ်မောမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ကားများ၏စံသတ်မှတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုအနည်းငယ်ရှိတယ် ကလို ။ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက် unhip ဖြစ်မနေပါနဲ့ - Hulu အပေါ်လုံးဝဝေး (အကောင်းဆုံး a.k.a. ) ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ။
New York, NY - ဇူလိုင်လ 12: မင်းသား Dave Franco (L) နှင့် Emma Roberts သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်၊ နယူးယောက်စီးတီးရှိ SVA ပြဇာတ်ရုံ၌ 'Nerve' နယူးယောက် Premiere သို့တက်ရောက်သည်။ (Mike Coppola / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၀ ။ အာရုံကြော
သရုပ်ဆောင် - မင်းသမီး Emma Roberts သည် Dave Franco၊ Colson Baker၊ Juliette Lewis၊ Emily Meade, Miles Heizer, Kimiki Glenn, Samira Wiley
တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ဟာအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပေမယ့်လာဘ်ထိုးနေတုန်းပါပဲ၊ ရိုက်ထည့်ပါ အာရုံကြော, Emma Roberts နှင့် Dave Franco သရုပ်ဆောင်ထားသော underrated နွေရာသီ 2016 romp ။ သရုပ်ဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေထက်အနည်းငယ်အသက်ကြီးပေမဲ့အလျင်အမြန်မြန်ဆန်တဲ့ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ကျောရိုးဒဏ်ရာတွေကနေအာရုံလွဲသွားစေပါတယ်။ အကယ်၍ 3D တွင်ရှိနိုင်သည့်မြင့်မားသောပျံသန်းနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်ရုပ်ရှင်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်သည် အာရုံကြော။
နာမည်တူ Jeanne Ryan ၏ဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ အာရုံကြော ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကောလိပ်တက်ရန် Staten ကျွန်းရှိသူမ၏နေအိမ်မှထွက်ခွာရန်ကြိုးစားနေသည့် Vee (Emma Roberts) သည်အလွန်အထက်တန်းကျောင်းအကြီးအကဲတ ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမ၏စွမ်းရည်သည်ပုံမှန်စံနှင့်ကွဲလွဲနေသည်ဟုမည်သူမျှမယုံကြည်ပါ။ အွန်လိုင်းအမှန်တရားဂိမ်းဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားမပါဘဲဝံ့လာတဲ့အခါ Vee ကဒီပျော်စရာမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမလေ့လာသည့်အတိုင်းသင်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးကစားသောအခါသင်၌ပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများအားလုံးမဟုတ်ပါ။ သူမအနားတွင်ချောမောသောသူစိမ်းတစ် ဦး (Dave Franco) နှင့်အတူ Vee သည်သူမ၏အာရုံကြောကိုပြသသည်။
အာရုံကြော Box Office ၏အဓိကပရိသတ်အတွက်ခိုင်မာသောမဲပေးမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သည်ခေတ်သစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုအကြောင်းအနည်းငယ်သာဖော်ပြသော်လည်းခေတ်သစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်ရုံတွင်အရည်အသွေးမြင့်ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ကားများ၏လိုအပ်ချက်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ မှခွဲပြီး ဆယ့်ခုနစ်၏ Edge, ထိုအရာတို့သည်အလွန်များကြ၏။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သံသယရှိပါတယ် အာရုံကြော ဒါကြောင့် re- ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်ငင်း streaming ကိုအတွက်ပရိသတ်တွေသစ်ကိုကောက်ယူအဖြစ်ကိုလိုက်နာရန်နှစ်များတွင်တစ် ဦး အစွန်းရောက်ဂန္တက်လေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကစားသမားဖြစ်မနေပါနဲ့, Hulu အပေါ်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရ။
၉ ။ မဟာမိတ်များ
ဒါရိုက်တာ Robert Zemeckis
သရုပ်ဆောင် - Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, မGoဲ Goode, Lizzy Caplan, Anton Lesser, Dieဂုတ် Diehl, Camille Cottin, Charlotte Hope, Marion Baily, Simon McBurney, Daniel Betts, Thierry Fremont, Raffey Cassidy
နှစ်ခုမဂ္ဂါစတာများကထိုလိုချင်သောအော်စကာရွှေအတွက်ပြသရန်ခိုင်မာသည့်အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ဖန်သားပြင်ကိုမျှဝေပေးသည့်ဆုရရာသီအားလုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအကယ်ဒမီဆုရှင်ဘရက်တ်နှင့်မာရီယန်ကိုတီးလတ်တို့အတွက်တွဲဖက်ခဲ့သည် မဟာမိတ်များ, နောက်ပိုင်းတွင်သူ့ဟာသူ Brad Pitt နှင့် Angelina ဂျိုလီရဲ့ခွဲခြာ၏အလယ်၌ပတ်ရစ်တွေ့မယ်လို့ရုပ်ရှင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါဟာအော်စကာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာ damper တစ်ခုပဲဟုထင်ရသည့်အသံသာဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော hits ၏လက်တဆုပ်စာကိုကိုင်တွယ်သူဒါရိုက်တာ Robert Zemeckis မှ ဖောရက်စ်ဂမ့် နှင့် ပျံသန်းမှု, မဟာမိတ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှစစ်ဆင်ရေးနှစ်ခု၏အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအောက်ပါအတိုင်း။ Max Vatan (Brad Pitt) နှင့် Marianne Beauséjourတို့သည်အန္တရာယ်များသောသာသနာပြုရန်လှုပ်ရှားစဉ်တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြသော်လည်းသူတို့၏သက်ဆိုင်ရာအလုပ်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်သူတို့၏သာယာချမ်းမြေ့သောအိမ်ထောင်မင်္ဂလာကိုကတိပေးသည်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ဟာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆန့်ကျင်ထိုးဖောက်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့ပြtroublနာတွေကကမ္ဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
မဟာမိတ်များ လူကြိုက်များသော Thanksgiving Box Office ပြိုင်ပွဲတွင် ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်တင်စားခံခဲ့ရပြီး၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏အမြင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာနည်းပါးသောပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က မဟာမိတ်များ တနင်္ဂနွေ၏အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အနည်းငယ်အဓိကဆုချီးမြှင့်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်ဖျော်ဖြေရေးသံသရာ၏လျင်မြန်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းတစ်လျှောက်လွဲချော်ခဲ့သောရုပ်ရှင်ကားများနှင့်အမီလိုက်ရန်ကစားရန်လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းတာက, Hulu ၏ပုဂ္ဂလိကကြည့်ရှုဘို့ငါတို့အိမ်မှာအိမ်မှာရုပ်ရှင်ရုံဖြစ်ဖို့ဒီမှာပါပဲ မဟာမိတ်များ, နှစ်ခု A- စာရင်းအခွက်တစ်ခုယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပြ။
နောက်တစ်ခု:8. တရားဝင် Blonde
၈ ။ တရားဝင် Blonde
ဒါရိုက်တာ Robert Luketic
သရုပ်ဆောင် - Reese Witherspoon, Luke Wilson, Matthew Davis၊ Selma Blair၊ Victor Garber၊ Jennifer Coolidge, Holland Taylor, Ali Larter, Jessica Cauffiel, Alanna Ubach, Oz Perkins, Linda Cardellini, Raquel Welch
စဉ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ Reese Witherspoon ရဲ့အချိန်ကာလရဲ့အကောင်းဆုံးဟာသစွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်သမိုင်းမှာကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်, တစ်စက္ကန့်နီးပါးအထင်ကရနှင့်ထာဝရသွား တရားဝင် Blonde ။ Witherspoon ဇာတ်ကားသည်မင်းသမီးနှင့်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်၏အချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်အမျိုးသမီးများအားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကိုအပြည့်အဝမှီခိုခဲ့သည်။ သူမသည်အိမ်တွင်ဇွန်လ Carter-Cash ကစားခြင်းအတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် မျဉ်းပေါ်မှာပဲလမ်းလျှောက်, ဒါပေမယ့်ရဲ့ဆုဖလား Elle ဝုဒ်ပိုင်ဟန်ဆောင်ကြကုန်အံ့။
အမန်ဒါဘရောင်း၏အမည်တူလူသိနည်းသည့်ဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ တရားဝင် Blonde ဖက်ရှင်ကုန်သွယ်ရေးကျောင်းသားနှင့် sorority ဥက္ကpresident္ဌ Elle Woods (Reese Witherspoon) ၏ရဲရင့်သောပုံပြင်ကိုပြောပြသည်။ သူမ၏ကြွယ်ဝသောရည်းစားဖြစ်သော Warner Huntington III (မDavဲဒေးဗစ်) မှစွန့်ပစ်ခံရပြီးနောက် Elle သည်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကျောင်းသို့ လိုက်၍ သူ့ကိုပြန်အမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူမသည်သူမ၏လက်မှတ်ပန်းရောင်အသွင်နှင့်အတူကျောင်းဝင်းသို့ struts နှင့်သူမကောင်လေးမလိုအပ်ပါဘူးသဘောပေါက်။ အဲဒီအစားသူမဟာသူမရဲ့လေ့လာမှုထဲကို ၀ င်လာပြီးသူမရဲ့ဘ ၀ ကိုမလှည့်ခင်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တရားဝင် Blonde မျှော်လင့်ချက်တွေကိုရိုက်နှက်ပြီး Elle Woods ရဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုတွေနဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သည် Reese Witherspoon အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် - ဂီတ၊ ဟာသနှင့်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုအတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရရှိခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်အကြာတွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနောက်ဆက်တွဲ တရားဝင် Blonde 2: နီ၊ အဖြူနှင့်ဆံပင်ရွှေရောင် - Hulu တွင်လည်းထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် - ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကို အခြေခံ၍ Laura Bell Bundy ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Broadway မှဂီတကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်သူမ၏ Chihuahua တို့၏စွမ်းရည်ကိုဘယ်တော့မှလျှော့မတွက်ပါနှင့်
New York, NY - မတ်လ 28: သရုပ်ဆောင်များအန်း Hathaway နှင့် Jason Sudeikis နယူးယောက်စီးတီးရှိမတ်လ 28, 2017 AMC လင်ကွန်းရင်ပြင်ပြဇာတ်ရုံမှာ '' Colossal '' Premiere တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Mike Coppola / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၇ ။ .ရာမ
ဒါရိုက်တာ Nacho Vigalondo
သရုပ်ဆောင် - အန်းဟတ်သ်ဝေး၊ ဂျေဆန်ဆူဒီကစ်၊ ဒန်စတီဗင်၊ အော်စတင်းစတိုဝဲလ်၊ Tim Blake Nelson၊ Rukiya Bernard၊ Agam Darshi
ခဏတစ်ဖြုတ်သင်ရိုက်ကူးမည့် Anne Hathaway ရုပ်ရှင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ သူမသည်နှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည် မင်းသမီးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ၊ နှင့်အညီထားရှိမည် အဲလာ Enchanted, ပြီးတော့ပိုပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအခန်းကဏ္ with နှင့်အတူဟာသလမ်းသွား၌တည်၏ Prada ကိုဝတ်ဆင်ပြီးမာရ်နတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲပါ။ နှင့် အချစ်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ Rachel Getting Married တွင်အော်စကာဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံရသည့်အလှည့်အပြောင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သူမသည်သူမ၏သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးအတွက် ပို၍ စွန့်စားခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူမရဲ့ခါးပတ်အောက်မှာအာကာသထဲကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်တဲ့ Interstellar နဲ့အတူ Hathaway ခေါင်းစီးပိုင်း .ရာမ ။
သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်အနက်ရောင်ဟာသတစ်ခုမှာအန်းဟာဟာဝေးသည်သူမနှင့်အတူအနည်းဆုံးအတူတူထားခဲ့သောဇာတ်ကောင်ကိုဆော့နေသည်ကိုတွေ့သည် အဆိုပါဆိုးကျိုးများ ) စာရေးဆရာနှင့်ပြောက်ကျားနေသော partier တစ် ဦး ဖြစ်သော Gloria အဖြစ်) ။ နယူးယောက်စီးတီးရှိသူမ၏တိုက်ခန်းမှစွန့်ပစ်ခံရပြီးကန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ဂလိုရီယာသည်သူမဇာတိမြို့ဖြစ်သော New Hampshire ရှိရုပ်ရှင်သို့ပြန်သွားသည်။ မကြာခင်မှာပဲသူမဟာတောင်ကိုရီးယားကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့creရာမသတ္တဝါကြီးထဲမှာသူမပါဝင်နိုင်တာကိုသတိပြုမိပြီးသူမရဲ့လုပ်ရပ်တွေကconsequencesရာမအကျိုးဆက်တွေကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတာလဲဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်။
.ရာမ စပိန်ဒါရိုက်တာ Nacho Vigalondo မှဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ဖြန့်ဖြူးသူ Neon အတွက်ပထမဆုံးဖြန့်ချိသည်။ ဝေဖန်အာရုံခံစားနေစဉ်၊ .ရာမ Box Office တွင်သိသိသာသာများပြားလာခြင်းနှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းတို့ကြောင့် Box Office တွင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်း၏တိုးချဲ့ငှားရမ်းခြင်းသဘောသဘာဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လုံးဝထူးခြားသည့်ရှုထောင့်ဖြင့်လက်နက်ကိုင်ထားသည် သငျသညျယခု Hulu အပေါ်သေးသူမ၏colရာအများဆုံးအခန်းကဏ္ in အတွက်အန်း Hathaway လက်လွတ်ချင်ကြဘူး။
SAN SEBASTIAN၊ စပိန် - စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်။ San Sebastian တွင်စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ကျင်းပသော ၆၃ ကြိမ်မြောက် San Sebastian နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ဒါရိုက်တာဒင်းနစ်ဗီယင်နီဗ (L)၊ မင်းသမီး Emily Blunt (C) နှင့်သရုပ်ဆောင် Benicio del Toro (R) တို့သည် 'Sicario' ဓာတ်ပုံပြပွဲသို့တက်ရောက်ခြင်း စပိန်။ (Carlos Alvarez / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၆ ။ Hitman
ဒါရိုက်တာ Denis Villeneuve
မင်းသား: Emily Blunt၊ Benicio del Toro၊ Josh Brolin, Victor Garber, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Julio Cesar Cedillo, Hank Rogerson, Bernardo Saracino, Maximiliano Hernandez
တစ် ဦး splashy ပွဲ ဦး ထွက်အောင်ပြီးနောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအောင်မြင်မှု၌တည်၏ Prada သည်မာရ်နတ်ဖြစ်သည် Emily Blunt သည်သူမအားယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးရုပ်ရှင်ကြယ်များထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ဟာသမှ ( ငါးနှစ်စေ့စပ်ခြင်း ) ဒရာမာ ( အဆိုပါရထားပေါ်တွင်မိန်းကလေး လုပ်ဆောင်ရန် မနက်ဖြန်၏ Edge ), အမ်မလီ Blunt ကအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါးရွှေကမ္ဘာလုံးအမည်စာရင်းတင်သွင်းအကြာတွင် Blunt ရဲ့သူမ 2015 ရဲ့မှာကဲ့သို့အဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းထွက်ရှိနေတုန်းပဲ Hitman ။
FBI အေးဂျင့် Kate Mercer (အမ်မလီဘလန်း) သည် FBI ၏ယောက်ျားကြီးများကွဲပြားမှုများမှတဆင့်တက်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်အဓိကတာ ၀ န်ကိုလက်ခံရရှိသည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်အစိုးရအရာရှိတ ဦး ဖြစ်သော Matt Graver (Josh Brolin) မှစုဆောင်းမှုအပြီးတွင် Kate နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲကိုဖုံးလွှမ်းရန်အမေရိကန် - မက္ကဆီကန်နယ်စပ်သို့ ဦး တည်သည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ကိတ်အဖွဲ့သည်ခက်ခဲသော Alejandro (Benicio del Toro) မှခေါင်းဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိပြီး၊ အခြားမူးယစ်ဂိုဏ်းသူဌေးတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။
Hitman လွှတ်ပေးအပေါ်သိသိသာသာဝေဖန်ကောင်းချီးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ဆုရာသီများအတွက်ရေဒါအပေါ်ခဲ့သညျ။ အကယ်၍ အကယ်၍ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာအမျိုးအစားများသာရရှိခဲ့သော်လည်း Hitman ဘဏ္hitာရေးထိခိုက်မှုဖြစ်ခြင်း၊ ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ထိပ်ဆုံးဆုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်များကိုဆက်လက်ပြောကြားခြင်းတို့အတွက်ထူးခြားသောအခွင့်အရေးရှိသည်။ သငျသညျမကြာခဏသေးငယ်တဲ့ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲရတဲ့မမြင်နိုင်ပေမယ့် စစ်သား del Toro ရဲ့ဇာတ်ကောင်အကြောင်းဒုတိယအရစ်ကျ, လာမည့်နှစ်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံ hit ပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်တွင် Hulu ကကမ်းလှမ်းထားသည့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များထဲမှတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ပါ။
တိုကျို - မတ် ၁၄ ရက် - ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ Park Tower ခန်းမ၌ပြသခဲ့သော 'The Holiday' ရုပ်ရှင်ကိုမြှင့်တင်ရန်မင်းသမီး Cameron Diaz နှင့်သရုပ်ဆောင် Jude Law တို့သည်ဓာတ်ပုံခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ကြသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုမတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာဂျပန်မှာဖွင့်မှာပါ။ (Junko Kimura / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၅ ။ အားလပ်ရက်
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2006
ဒါရိုက်တာ Nancy Meyers
သရုပ်ဆောင် - Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli WallachShannyn Sossamon, Edward Burns, Rufus Sewell
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအားလပ်ရက်စိတ်ဓာတ်ဝင်ရန်လူတိုင်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည့်ပွဲလမ်းသဘင်ရုပ်ရှင်အနည်းငယ်ရှိသည်။ အများအားဖြင့်ထိုသို့သောဆိဖော်ရွေခရစ်စမတ်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည် Grinch သည်ခရစ်စမတ်၊ နှင့် Santa Clause ။ သူတို့ရဲ့နှစ်စဉ်ရုပ်ရှင်တွေကိုနှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းနည်းသူများအတွက်ဆောင်းတွင်းထား Rom-coms အကြောင်းပါ။ သော်လည်း အမှန်တကယ်ချစ်ပါ အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အထူးနေရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်၊ အားလပ်ရက် အဆိုပါ mistletoe အောက်မှာ၎င်း၏အချိန်ထိုက်တန်ပါတယ်။
Cameron Diaz နှင့် Kate Winslet တို့သည်အားလပ်ရက်များအတွက်အချိန်တိုအတွင်းအပြောင်းအလဲလိုအပ်နေသောအမျိုးသမီးနှစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အမန်ဒါဝုဒ် (ကင်မရွန်ဒီဇက်) သည်အလုပ်များလွန်းခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရန်အချိန်လုံလုံလောက်လောက်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် Iris Simpkins (Kate Winslet) သည်အချိန်ဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်တူညီသောခံစားချက်မခံစားရသောလူတစ်ယောက်အပေါ်အချိန်ကုန်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကအားလပ်ရက်အတွက်အိမ်များလဲလှယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည် - Iris သည် Los Angeles ရှိ Amanda's သို့၊ Surrey ရှိ Amanda မှ Iris to 'ကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
Jude Law နှင့် Jack Black တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အတွက်ရုပ်ရှင်တွင်တွဲဖက်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဥပဒပိုကောင်းဘို့အမန်ဒါပြောင်းလဲသူ Iris က '' အစ်ကိုဂရေဟမ်, နှင့် Black ကပိုကောင်းဘို့ Iris ကိုပြောင်းလဲတဲ့သူမန်ဒါရဲ့ရည်းစားဟောင်းရဲ့လက်ထောက်ကစား။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲကြည့်ပါ ဦး ။ အားလပ်ရက် အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏ပုံရိပ်ကိုခြယ်သပေမယ့်ကျနော်တို့ကနန်စီ Meyer ရဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်ကိုချစ်ကြောင်းရတဲ့အရာတွေစုံလင်သောပေးသည်။ ၎င်း၏ကန ဦး ဖြန့်ချိပြီးနောက် 10 နှစ်ကျော် အားလပ်ရက် နေဆဲ Charm ။
သရုပ်ဆောင် - Daniel Craig၊ Christoph Waltz၊ Lea Seydoux၊ Ben Whishaw၊ Naomie Harris၊ Dave Bautista, Andrew Scott, Monica Bellucci, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Jesper Christensen, Alessandro Cremona, Judi Dench
ဘတ်ဂျက်ကြီးသောရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာသည့်အရာအဖြစ်အာမခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သငျသညျကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်ဟာသအပေါ်မှီခိုလို့မရပါဘူး, နှင့်စူပါဟီးရိုးနှင့်ဂိမ်းခတောင် hit သို့မဟုတ်လွဲချော်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်လက်မှတ်များကိုရောင်းရန်အမြဲတမ်းအားထားနိုင်သူမှာ Bond … James Bond ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် Die Another Day နှင့်အဆုံးသတ်သည့်နောက်ထပ်အောင်မြင်သောပြေးပွဲတစ်ခုပြီးနောက်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းစီးရီးသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဒယ်နီယယ်ခရက်ခ်နှင့်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည် တော်ဝင်ကာစီနို, နှင့်ဘွန်းနည်းနည်းနှေးကွေးမထားပါဘူး။
တော်ဝင်ကာစီနို သို့လှိမ့် Solace ၏ကွမ်တမ် , အကယ်ဒမီဆုရအနိုင်ရ (Adele ကအကောင်းဆုံးမူရင်းသီချင်းအတွက်) သို့ဆက်ပြောသည် မှော်ဘီ အော်စကာဆုရအစဉ်အလာသီချင်းအစဉ်အလာသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် Spectre နှင့်အတူဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်စီးရီးရှိ ၂၄ ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်၌ - ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည် ၅၀ ၏ထက်ဝက်မျှသာရှိသည် - ဂျိမ်းစ်ဘွန်းသည် Spectre ဟုခေါ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုအဖွဲ့ကိုဆန့်ကျင်။ ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သူသိသည့်အတိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) သည်သူ၏အတိတ်ကပြtroublနာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Spectrum ဂရမ်မီဆုရအဆိုတော်ဆမ်စမစ်ကပူးတွဲရေးသား။ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည့်၎င်း၏အဓိကသီချင်းသီချင်းအတွက်အကယ်ဒမီဆုအတွက်အကောင်းဆုံးဆုအတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ အခြားအော်စကာကိုအိမ်သို့ယူခြင်း၏ဝါကြွားသောအခွင့်အရေးများရှိခြင်းမှတပါး Spectrum ယခုနှစ်ဆsix္ဌမမြောက်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီးနောက်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲ Bond 25 အတွက်ဖိနပ်ကြီးတွေကျန်ခဲ့ရတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း၏နောက်ဆုံးထွက်စွန့်စားခန်းများအတွက် Hulu သို့သွားပါ။
၃ ။ မင်းရှေ့မှာ
ဒါရိုက်တာ Thea Sharrock
မင်းသား Emilia Clarke၊ Sam Claflin၊ Jenna Coleman၊ Charles Dance၊ Janet McTeer၊ မMatthewဲ Lewis၊ Bendan Coyle၊ Vanessa Kirby၊ Ben Lloyd-Hughes, Steve Peacocke, Samantha Spiro, Joanna Lumley, Christopher Wilson
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ကပ္ပတိန်အမေရိကနှင့်စာသင်ကျောင်းအသစ်ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရှည်လျားသောရိုက်ချက်နှင့်တူသည် Star Wars သတ္တဝါများနှင့်စက်များ။ ဒါပေမယ့်စာပေလိုက်လျောညီထွေ၏တည်းခိုပါဝါရေတွက်မထားပါနဲ့။ (ရုံ၏အခြေအမြစ်မရှိအောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပါ အရိပ်ငါးဆယ် ရုပ်ရှင်။ ) နွေရာသီ 2016 ရဲ့မျက်ရည်ယိုယွင်းအံ့အားသင့်အိပ်ပျော်ခြင်း hit မင်းရှေ့မှာ သငျသညျ Hulu အပေါ်ငိုစေလိုသည်။
Jojo Moyes ရဲ့အရောင်းရဆုံးဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီး၊ မင်းရှေ့မှာ Lou Clark ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအောက်ပါအတိုင်း ( ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ Emilia Clarke နှင့် Will Traynor (Sam Claflin) တို့ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောကံကောင်းသူ Lou သည်သူမ၏မိသားစုကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေစေရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်သူဌေးစီးပွားရေးသမားဝီလ်ဘီးကိုအိမ်စောင့်အဖြစ်အလုပ်ရစေသည်။ သူ၏မတော်တဆမှုကသူ့ကိုထံမှခေါ်ဆောင်သွားသောအရာကိုနာကြည်းထွက်ခွာသွားခဲ့သည်အဖြစ်ပထမတော့ဝီ Lou ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အကူအညီကို။ ဒါပေမယ့် Lou ကသူ့ကိုအသက်ရှင်ရကျိုးနပ်တဲ့ဘ ၀ ကိုပြတယ်
ဒီမှာချုံပတ်ပတ်လည်ရိုက်နှက်မှုမရှိပါ မင်းရှေ့မှာ သင်ငိုစေမည် ဟုတ်တယ် သငျသညျရုပ်ရှင်တွေသင်ငိုစေပါဘူးဟုဆိုသည်လျှင်အရေးမထားဘူး။ ၏နောက်ဆုံး sequence ကို မင်းရှေ့မှာ ရန်စိန်ခေါ်မှုကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ ။ Lou နှင့် Will ခရီးစဉ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းအရစွဲလမ်းမှုခံရပြီးနောက်သင်သည်အရာရာကိုခံစားရလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော်ငွေရှာနေသော်လည်း Emilia Clarke သည်စာအုပ်၏နောက်ဆက်တွဲအပေါ် အခြေခံ၍ နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်မည်လားဆိုသည့်စကားလုံးမရှိသေးပါ။ သင်အရင်သွားပါ ။ အကယ်၍ ဖြစ်ခဲ့ရင်သင်လည်းငိုပါလိမ့်မယ်။
မက္ကဆီကို၊ မက္ကဆီကို - ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၅ - မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ မက္ကဆီကိုရှိ Cinemex Antara Polanco တွင်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သော Mark Wahlberg နှင့် Will Ferrell တို့သည် 'Daddy's Home' အနီရောင်ကော်ဇောပြသခြင်းကိုတက်ရောက်သည်။ (Paramount ရုပ်ပုံများအတွက်ဗစ်တာချားဗေ့စ် / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ဒါရိုက်တာ Sean Anders
သရုပ်ဆောင်မင်းသား Will Ferrell၊ Mark Wahlberg၊ Linda Cardellini၊ Scarlett Estevez၊ Owen Wilder Vaccaro၊ Thomas Haden ဘုရားကျောင်း၊ Hannibal Buress၊ Bobby Cannavale၊ Bill Burr၊ Jamie Denbo၊ ခရစ် Henchy
ပိုစတာကိုကြည့်နေ ဖေဖေရဲ့မူလစာမျက်နှာ နှင့်၎င်း၏ logline ဖတ်နေ, တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားခေတ်ကနေလာရင်ဖြစ်စေတစ်စုံတစ် ဦး ကဖွင့်ဖြစ်စေစိတ်ကူးလိမ့်မယ်။ သို့သော်အဘယ်သူမျှမက '' 80s အလယ်အလတ်ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုမျှမကကမဟုတ်ပါဘူး စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် ပုံကြမ်းဘဝသို့ရောက်ကြ၏။ ဖေဖေရဲ့မူလစာမျက်နှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကထုတ်လွှင့်မည့်အဆိုးရွားဆုံးဟာသမဟုတ်သည့်အမှန်တကယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သည် Will Ferrell နှင့် Mark Wahlberg တို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးပြီးသူတို့၏မအောင်မြင်သောဓာတုဗေဒသည်သင်္ဘောတစ်ခုလုံးကိုမောင်းနှင်သည်။
ဖေဖေရဲ့မူလစာမျက်နှာ ကိုယ့်ဇနီး Sara ရဲ့ (Linda Cardellini) ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်လျောက်ပတ်သောဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝပေမယ့်ပျော့ပျောင်းတဲ့ပထွေးဖြစ်သူ Brad Whitaker (Will Ferrell) ကိုဗဟိုပြုသည်။ Sara ၏ခင်ပွန်းဟောင်း Dusty (Mark Wahlberg) သည်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်သူတို့၏ဘဝများသို့ပြန်လည်စီးနင်းလာသောအခါ Brad ၏လက်ဝဲသဲသဲ့ကြိုးပမ်းသည်။ များမကြာမီဖခင်နှင့်ပထွေးတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြရန်နှင့်မိသားစု၏ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုရရှိရန်လုံးလုံးလျားလျားတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။
ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖေဖေရဲ့မူလစာမျက်နှာ Will Ferrell ၏အမြင့်ဆုံးစုစုပေါင်း Live-action ရုပ်ရှင်အဖြစ်ယင်း၏ပြဇာတ်ရုံကိုပိတ်လိုက်သည်။ ဒါအမှန်ပဲ ဖေဖေရဲ့မူလစာမျက်နှာ Will Ferrell ရဲ့အရောင်းရဆုံးအဖြစ် unseated Buddy ဟာ elf ။ ခရစ်စမတ်နေ့မှထုတ်သောရုပ်ရှင်သည်ယခုနှစ်တွင်ခရစ်စမတ်နှင့်ဆက်နွယ်သောနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖေဖေ၏ဒရာမာကိုနှစ်ဆတိုးစေခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သငျသညျအထဲကစစျဆေးဖို့ရုပ်ရှင်ရုံသို့ပြေးမီ ဖေဖေရဲ့မူလစာမျက်နှာ2ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်မတိုင်မီ Hulu တွင်ပထမဆုံးအရစ်ကျပေးဆပ်ရန်သေချာပါစေ။
Westwood, CA - နိုဝင်ဘာ 06: မေီအမ်ဒမ်, Westwood, California ရှိနိုဝင်ဘာလ 6, 2016 ရက်တွင် Regency ကျေးရွာပြဇာတ်ရုံမှာ Paramount ရုပ်ပုံများ '' Arrival '၏ Premiere ရောက်ရှိသည်။ (Gabriel Olsen / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁ ။ ဆိုက်ရောက်
သရုပ်ဆောင် - Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tai Ma
မေီအဒမ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ပြဇာတ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည် Junebug, သူမသည်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကယ်ဒမီဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည့်အဘို့, သူမယုံကြည်စိတ်ချရသော A- စာရင်းရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒစ္စနေးကာတွန်း - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ - လှုပ်ရှားမှုဂီတစပ်ကိုခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာ အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရန် အမေရိကန် Hustle, သူမကအားလုံးကိုလုပ်ပြီးဒါကိုပြသဖို့အကယ်ဒမီဆု ၅ ခုကိုရတယ်။ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အဒမ်၏နောက်ဆုံးအလှည့်သည်ကံမကောင်းကြောင်းအော်စကာရွှေကိုမရသော်လည်း ဆိုက်ရောက် သူမ၏အခွက်သိပ္ပံဝတ္ထုမှတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာ Denis Villeneuve မှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသူ ဆစ်ကာရီယိုအကျဉ်းသားများ နှင့် Blade Runner 2049 ), ဆိုက်ရောက် ဘာသာဗေဒပါမောက္ခ Louise Banks (အေမီအဒမ်) တွင်စင်တာများရှိသည်။ ကမ္ဘာမြေသို့ကြီးမားသောအာကာသယာဉ်များရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေဖြင့် Louise သည်ဂြိုဟ်သားများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သူမ၏အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူမဟာသူရဲကောင်းဘာသာဗေဒပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Louise ဟာသူကိုယ်တိုင်သာမကကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုပါအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းကိုစွန့်စားလိုက်ပါတယ်။
ထိုရုပ်ရှင်သည်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စာရေးဆရာ Ted Chiang ရေးသားခဲ့သော ၁၉၉၈ ဇာတ်ကြောင်းသင့်ဘဝ၏ဇာတ်လမ်းတို၏ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ဆိုက်ရောက် Box Office ၏ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးရုပ်ပုံနှင့်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအပါအ ၀ င်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ ၈ ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ မေီအဒမ်လည်းအသိအမှတ်ပြုခံထိုက်သော်လည်းသင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ Hulu သည်မျက်လုံးဖွင့ ်၍ ခေတ်မီဆန်းပြားသည့်သိပ္ပံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဆိုက်ရောက် ။
ဘယ်ရုပ်ရှင်တွေကို Hulu မှာကြည့်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
အခါ shannara ရာဇဝင်ရာသီ2Netflix ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်
bates မိုတယ် 2017 စတင်သောအခါပါဘူး
သင်လက်ဆောင်တစ်ခု netflix ကိုကြေးပေးသွင်းနိုင်ပါ